သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): February 2009
မြို့မှာတစ်နှစ်ကျော်နေလာခဲ့တဲ့အတွက် မြို့က အကျင့်တွေပါလာတာထင်ရဲ့ ။ အတုမြင်ပြီး အတတ်သင်ခဲ့သလားတော့ မပြောတတ်။ အောင်မိုးဟာ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်အမူအယာတွေလုပ်ပြတတ်လာတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အမျိုးသမီးတွေလာရင် မတော်မရာ ကြည့်မကောင်းအောင် လုပ်ပြတတ်တာပါဘဲ။
ပြီးတော့လဲ ကလေးတွေကို မကြာခဏရန်ပြုလာတယ်။ အောင်မိုးလက်ချက်နှင့် ခြစ်ရာပြဲရာ ဒဏ်ရာလေးတွေ ရရှိဖူးကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေ မနည်းတော့။
"အောင်မိုး ကုတ်ခြစ်ကိုက်ခဲလိုက်လို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဒဏ်ရာအတော်လေးရသွားတယ်။ အခု ဆေးခန်းကို ပို့ထားရတယ်။ ဒဏ်ရာက တော်တော်ပြင်းတယ်လို့ ကြားတယ်"
ရွာထဲကလူတွေ ပြောနေကြတဲ့စကားပါ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာမလိုဘဲ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်ကြားနဲ့ တစ်ရွာလုံး ပျံ့ နှံ့သွားတယ်။ မျောက်ကုတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့  မိဘတွေ ညီအစ်ကို ဆွေမျိုးတွေက အောင်မိုးကို မကျေနပ်ကြတော့။ ကိုယ့်သွေး ကိုယ့်သားကို ထိပါးလာပြီဆိုတော့ အောင်မိုးကို လက်စားချေချင်နေကြလေရဲ့ ။ တုတ်ဓါးတွေ ကိုင်ပြီး အောင်မိုးကို သတ်မယ်တကဲကဲ။
ဟုတ်တယ်လေ။ သူတို့ဘက်ကကြည့်တော့လဲ မှန်နေတာဘဲ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်က လူသားစင်စစ်ကို ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရအောင် ရန်ပြုထားတာကိုး။ ကျောင်းသားလေးရဲ့  မျက်နှာမှာ ကုတ်ခြစ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလဲ သွေးတွေက ခပ်စို့စို့။ အောင်မိုးရဲ့  လက်ချက်တွေပေါ့။
တော်တော်ကို ရက်စက်တဲ့အောင်မိုး။ ဒါကြောင့်လဲ အကုတ်ခြစ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားရဲ့  မိဘဆွေမျိုးတွေက လက်ယားနေကြပြီ။ အောင်မိုးကို အမှုန့်ကြိတ်ချင်နေကြပြီ။ တောသားတွေရိုးသားတယ်ဆိုပေမဲ့ သွေးအရင်းကို ထိပါးလာရင်တော့ အသက်ချင်းလဲပစ်မဲ့သူတွေချည်းပါဘဲ။
ဒီလိုအခြေအနေရောက်လာပြန်တော့လဲ ဆရာတော် ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ မရတော့။ အဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းပေးမှ တော်ရာကျမယ်ဆိုတာ ဆရာတော်သဘောပေါက်ပြီးသား။ အောင်မိုးဟာ လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ သူလဲ သက်ရှိသတ္တ၀ါလေးဘဲ။ အသက်တစ်ချောင်း လွယ်လွယ်နဲ့ မသေသင့်ဘူး။
ပြီးတော့ သူ့ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဆရာတော် ကြိုးစားမွေးလာခဲ့ရတာ။ ဆရာတော်က ရွာသားတွေကို ဖျောင်းဖျပြောဆိုပြီး အောင်မိုးကို မသတ်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ရတယ်။ နောက်တစ်ခါမဖြစ်စေရပါဘူးလို့လဲ ကတိပေးလိုက်ရတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့  ကျေးဇူးကြောင့်ဘဲ အောင်မိုးလေး အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားရှာတယ်။
ရွာသားတစ်ချို့ ကတော့ ဆရာတော့်စကားကြောင့်သာ နားထောင်လိုက်ရပေမဲ့ ကွယ်ရာမှာကျတော့ တောက်တစ်ခေါက်ခေါက် နေကြလေရဲ့ ။
နောက်တစ်ခါမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ ကတိပေးပြီးမှ ဆရာတော် အခက်တွေ့နေတယ်။ အောင်မိုးကို လှောင်အိမ်ထဲ ပြန်ခေါ်လို့မရတော့။ သစ်ပင်ပေါ်မှာဘဲ အမြဲနေနေတယ်။ ကြုံသလိုရှာဖွေစားသောက်တယ်။ မန္တလေးပြန်အောင်မိုး ဆိုင်းဘုတ်အောက်ကို အောင်မိုး မခိုဝင်တော့ဘူး။ ဆရာတော် လုံးဝအခက်တွေ့နေလေပြီ။
ဆရာတော့်စကားကိုတောင်မှ နားမထောင်တော့ရင် ကျန်တဲ့လူတွေရဲ့ စကားဆို ပိုဆိုးပြီပေါ့။ ချော့လို့မရ ခြောက်လို့ မရ ဖြစ်နေတယ်။ တောထဲကို မောင်းထုတ်ပြန်တော့လဲ ကျောင်းဝင်းထဲဘဲ ပြန်ပြန်လာတယ်။
"သား.. အောင်မိုးလေးရယ်... မင်းဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် ဆိုးနေရတာလဲ။ လိမ္မာစမ်းပါသားရယ်..
မင်းမန္တလေးက ပြန်လာတော့ ရွာသူရွာသားတွေအားလုံး ၀မ်းသာနေကြတာ... တစ်ရွာလုံးက မင်းကို ချစ်ကြပါတယ်... ဘာအတွက်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားရတာလဲ... ပြန်လိမ္မာပါလား သားရယ်.... မင်းလိမ္မာလာရင်.. တစ်ရွာလုံး ပျော်ရွှင်နေကြမှာလေ.... မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့ သားရယ်..."
ဆရာတော်လဲ အောင်မိုးအတွက်နဲ့ စိတ်ဒုက္ခရောက်နေရပြီ။ ရွာသူရွာသားတွေကိုလဲ ဆရာတော် အားနာနေပြီ။ တစ်ရွာလုံးက ဆရာတော်ကို ကြည်ညို ယုံကြည်လို့ ပင့်ဆောင်ပြီး ကိုးကွယ်ထားကြတာမဟုတ်လား။ အခု မျောက်တစ်ကောင်အတွက်နဲ့ ရွာသားအများစုစိတ်ဆင်းရဲ နေရပြီဆိုတော့ ဆရာတော်လဲ ဘယ်စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါ့မလဲ။ အောင်မိုးလေးသာ လိမ္မာလာရင် အားလုံးအဆင်ပြေမှာ သေချာတယ်။
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အောင်မိုးလေး မြန်မြန်လိမ္မာပါစေလို့သာ ဆရာတော် ဆုတောင်းနေလေရဲ့ ။
(အပိုင်း ၁၀ ကို ဆက်ဖတ်ပါ)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:20 No comments:
အနေအထိုင်အသားမကျသေးတဲ့အတွက် အောင်မိုးကို သူ့လှောင်အိမ်ကြီးထဲမှာဘဲ နေစေတယ်။ အပြင်ကို ပေးလွတ်ရင် အောင်မိုးကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် တစ်ခြားသူတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လေ။ အဲဒီ လှောင်အိမ်ကြီးထဲမှာဘဲ ရေမီးရိက္ခာအစုံ... အဲလေ... စားစရာတွေ အစုံအလင်နှင့်သူ့ကိုထားတယ်။
နေရာဟောင်းဆိုပေမဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကွဲကွာခဲ့ရတဲ့အတွက် နေရာက သူ့အတွက် စိမ်းသွားခဲ့ပြီ မဟုတ်လား။
အစားအသောက်မှန်တဲ့အတွက် တစ်လနှစ်လအတွင်း အောင်မိုးလေးဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ၀ဖြီးလာတယ်။ နဂိုပုံစံဖြစ်လာတယ်။ လူတွေနှင့်လဲ ပြန်ရင်းနှီးလာတယ်။ လှောင်အိမ်ထဲမှာချည်း နေထိုင်ရတာကိုလဲ ငြီးငွေ့လာပြီထင်ရဲ့ ။ အပြင်ထွက်ချင်တဲ့ ပုံစံ အမူအယာပြလာတယ်။ အောင်မိုးရဲ့  စိတ်ကို သဘောပေါက်တဲ့ ဆရာတော်လဲ ကဲပါလေ.. သူ့ခမျာ.. အပြင်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်ရှာမှာဘဲ။ မန္တလေးမှာတုန်းကလဲ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လှောင်အိမ်ထဲမှာ နေလာခဲ့ရတာဆိုတော့ သနားစရာ ကောင်းပါတယ် လို့ စဉ်းစားပြီး အောင်မိုးကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောင်မိုးလေးမှာ ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး။ ရွာဦးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ သရက်ပင်တွေ ပိန္နဲပင်တွေ မှန်ကူခြုံတွေ မန်ကျည်းပင်တွေ၊ အဲဒီ အပင်တွေကြားထဲမှာဘဲ ဟိုဘက်ကူးလိုက် ဒီဘက်ကူးလိုက်နဲ့ တစ်ကောင်ထဲ ပျော်မြူးစွာ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားကစားနေလေရဲ့ ။ ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာ လှောင်အိမ်ထဲ ၀င်စားလိုက်၊ ကစားချင်တဲ့အချိန်အပြင်ထွက်ပြီးကစားလိုက်၊ အိပ်ချင်တဲ့အချိန် လှောင်အိမ်ထဲ ၀င်အိပ်လိုက်နဲ့ အောင်မိုးလေး ဇိမ်ကျနေခဲ့တယ်။
မန္တလေးပြန်အောင်မိုး ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကလေးလဲ မြေဖြူနဲ့ရေးထားတာက တစ်ကြောင်း ရာသီဥတုဒဏ်ခံရတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် မကြာခဏထပ်ခါထပ်ခါရေးနေရတယ်။ ရောင်စုံမြေဖြူလေးတွေနဲ့ ထပ်ပြီး ရှိတ်ပ်ဆွဲရေးထားတဲ့အတွက် တစ်မျိုးကြည့်ကောင်းနေလေရဲ့ ။ ထူးဆန်းတာက အောင်မိုးလေးဟာ ကျောင်းမှာ မွေးထားတဲ့ ခွေးတွေ ကြောင်တွေနဲ့ ပြန်ပြီး မရင်းနှီးတော့ဘူး။ ခပ်တန်းတန်းတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ခွေးတွေကလဲ သူ့ကို ဟောင်စပြုလာတယ်။
ရက်ကိုလစား၊ လကိုနှစ်စားပြီး အောင်မိုးလေး နမ္မားရွာဦးကျောင်းကို ပြန်ရောက်ရှိလာတာ တစ်နှစ်ကျော်ကျော် နှစ်နှစ်အတွင်း ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အောင်မိုးလေးလဲ ခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းပြီး အားကောင်းမောင်းသန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။
ကြုံကြိုက်လို့ လာရောက်ကြည့်ရှုကြသူတွေလဲ မနည်းတော့။ အောင်မိုးအတွက် စားစရာတွေကလဲ အလျံပယ်ဖြစ်နေပြီ။ မန္တလေးပြန်အောင်မိုး ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကလေးကလဲ ရောင်စုံမြေဖြူအစား ရောင်စုံသင်္ဘောဆေးလေးနဲ့ ဖြစ်နေပြီ။ အောင်မိုးရဲ့  နေအိမ်လေးမှာ လှလှပပလေးနဲ့ နေချင့်စဖွယ်ဖြစ်နေလေရဲ့ ။
အရာရာပြည့်စုံပြီး အာလုံးအဆင်ပြေပြီလို့ ယူဆလိုက်ကာမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။
မန္တလေးပြန်အောင်မိုး ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ရောင်စုံသင်္ဘောဆေးနဲ့ ကျကျနနရေးလို့ တင်ထားပြီးတဲ့နောက် အောင်မိုးလေး ဘ၀င်လေဟပ်သွားလေပြီထင့်။ အချိုးတွေ တစ်စတစ်စပြောင်းလွဲလာတယ်။ အနေအထိုင်မိုက်ရိုင်းလာတယ်။ သွေးကြီးလာတယ်။
စိန်နားကပ်ကြောင့် ပါးပြောင်တာလား၊ အလိုလိုက်လွန်းလို့ ကမ်းတက်တာလား၊ လူတွေကဘဲ အစသန်လို့လား၊ လူတွေ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာကိုဘဲ မျက်စိနောက်လာလို့လား ဒါမှမဟုတ် ရူးသွပ်သွားလို့များလား မပြောတတ်တော့။ ရွာဦးကျောင်းဝင်းထဲ လာရောက်ပြီး သူ့ကိုကြည့်ရှုလာကြတဲ့သူတွေကို ရန်ပြုလာတယ်။
ယုတ်စွအဆုံး ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အတွက် ဆွမ်းလာပို့တဲ့ သူတွေကိုတောင်မှ စော်ကားလာတယ်။
မတော်မရာလုပ်ပြတယ်။ သစ်ကိုင်းကျိုးတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ဆရာတော့်စကားကိုတောင် သူ နားမထောင်တော့ဘူး။ ကိုယ်မွေးတဲ့မျောက် ကိုယ့်ပြန်ခြောက် ဆိုသလို ဖြစ်လာတယ်။ အလိုလိုက်လို့ အမိုက်စော်ကားလာတယ်။
အော်... တရားရစရာကောင်းလိုက်တာနော်။ လူတွေမှမဟုတ် အဟိတ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေတောင်မှ တစ်ခုခုအတွက် မာနတွေတက်တတ်ကြသေးတာပါလား။ ဇာတ်တော်နိပါတ်တော်ထဲက စကားတွေ အရမ်းမှန်တယ်။ လည်ဆွဲလေးစွပ်ပေးလိုက်လို့ ဘ၀င်မြင့်သွားတဲ့ ပုပ်သင်ညို၊ ဦးချိုအလှကြောင့် မာနတက်နေတဲ့ သမင်၊ အင်အားကြီးမားမှုကြောင့် ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ခြင်္သေ့၊ အားလုံး အားလုံးဟာ မာနတွေ ကိုယ်စီနဲ့ပါလား။
အောင်မိုးစိတ်ကြီးဝင်ပြီး မာနတက်လာခြင်းရဲ့  အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အောက်က အချက်အလက်ကလေးတွေ တွေ့လာရတယ်။
၁။မန္တလေးပြန်အောင်မိုး ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကို စပါယ်ရှယ်တင်ထားခြင်း
၅။အောင်မိုးကို ဟောင်တဲ့ခွေးကို ရိုက်ပြီးဆုံးမခြင်း
ဒါက အကြမ်းဖျင်းတွေးတောယူဆထားတာပါ။ အခြားအချက်အလက်များစွာလဲ ပါဝင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဘာဘဲ ပြောပြော အောင်မုိုးရဲ့  စရိုက်ကား တစ်စထက် တစ်စ ပိုဆိုးဆိုးလာတယ်။ မျောက်ကျင့် မျောက်ကြံ ကြံလာတယ်။ သူ့ကို ကရုဏာမျက်ဝန်းနဲ့ကြည့်တဲ့သူတွေကို သူက ဒေါသမျက်လုံးနဲ့ မီးဝင်းဝင်းတောက် ပြန်ကြည့်တတ်လာတယ်။ ဆရာတော့် မေတ္တာ၊ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့  စေတနာ၊ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့  ကရုဏာတရားတွေကို သူဥပေက္ခာပြုလာတယ်။ မေတ္တာစိတ်နှင့် အစားအစာလာပေးတဲ့သူတွေရဲ့  လက်ကို ဒေါသစိတ်နှင့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပုတ်ချတတ်လာတယ်။ အောင်မိုးရဲ့  စိတ်ဓါတ် အဆိုးဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့လေပြီ။
(အပိုင်း ၉ ဆက်ဖတ်ပါ)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:25 No comments:
အောင်မိုးကား ရွာဦးကျောင်းကို ပြန်ရောက်ရှိခဲ့လေပြီ။
တောရွာက ဆီမီးမှိတ်တုတ်တုတ်အရောင်ကို ပစ်ပယ်ပြီး မြို့ပြလျပ်စစ်မီးရောင်အောက် တစ်နှစ်လောက် နားခိုလာခဲ့တဲ့ အောင်မိုးလေးဟာ မထင်ရလောက်အောင် ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်ခဲ့လေရဲ့ ။ နဂိုကထဲက မျောက်မျက်နှာဆိုတာ ခပ်စုပ်စုပ်ဘဲမဟုတ်လား။ လူအိုတော့ မျောက်၊ လမ်းအိုတော့ ချောက် လို့တောင် ဆိုရိုးရှိတယ်လေ။ အခုတော့ ခပ်စုပ်စုပ်မျက်နှာပေါ် ထပ်ပြီး ခပ်စုပ်စုပ်ဖြစ်နေပြန်တော့ စဉ်းစားလို့သာ ကြည့်ကြပေတော့။ အောင်မိုးရဲ့  ရုပ်ရည် ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကို သဘောပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်။
ကိုရင် ကျောင်းသား ရွားသားများနှင့် ပြည့်နှက်ပြီး ရွာဦးကျောင်းဝင်းထဲ စည်ကားသိုက်မြိုက်နေတယ်။ စည်ကားမှာပေါ့လေ။ ထုံးစံအတိုင်း အောင်မိုးတစ်ယောက် (အဲ.. အဲ... တစ်ကောင်) မြို့ကြီးပြကြီးက ပြန်လာခဲ့တာကိုး။
ရေတွက်ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒီရွာလေးမှာ အောင်မိုးလို မန္တလေးကို မရောက်ဖူးကြသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး။ အမှန်ဝန်ခံရရင် ရွာလူဦးရေရဲ့  အပုံကိုးဆယ်လောက်ဟာ မန္တလေးဆိုတဲ့ မြို့ကြီးကို မရောက်ဖူးကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မရောက်ဖူးတဲ့ အဲဒီမြို့ကြီးကို အောင်မိုးရောက်ခဲ့ပြီးပြီလေ။ ရောက်ရုံရောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကြီးတောင် နေထိုင်လာခဲ့တာ။ ကျနော်ပြောရဲတယ်။ အဲဒီရွာသားတွေအားလုံး ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် အပါအ၀င် မန္တလေးမြို့ကြီးမှာ အောင်မိုးလောက် ဘယ်သူမှ ကြာကြာမနေဖူးကြဘူး။ ဘုရားဖူးသွားရုံလောက်ကလေးသာ အလည်အပတ်သွားကြတာလေ။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်နေပြီး ပြန်ခဲ့ကြတာချည်းပါဘဲ။
ဒါကြောင့်မို့လဲ မန္တလေးက ပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့ အောင်မိုးကို ကြည့်ချင်ရှုချင်တဲ့သူတွေ ပေါမှပေါ။ ကိုရင် ကျောင်းသားတွေဆို ကြံကြံဖန်ဖန် အောင်မိုးကို အားကျနေကြလေရဲ့ ။ ငါတို့လဲ အောင်မိုးလို မန္တလေးမှာ တစ်နှစ်လောက် နေခွင့်ရရင် ဒီဘ၀ သေပျော်ပါပြီကွာ ဆိုပြီး အားပါးတရ ပြောဆိုနေကြတယ်။
ဆရာတော် ရွာဦးကျောင်းကို ရောက်ရောက်ချင်း အောင်မိုးကို လှောင်ချိုင့်ထဲက ထုတ်ယူလိုက်တယ်။ အောင်မိုးကို လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ မြင်ရတာ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် စိတ်ကျဉ်းကြပ်နေပုံရပါတယ်။ လည်ပတ် ပတ်ပေးပြီး သံကြိုးခပ်ရှည်ရှည်နဲ့ သရက်ပင်တစ်ပင်မှာ ချည်ထားလိုက်တယ်။ သူ့အနားမှာ ငှက်ပျောမှည့်တစ်ဖီးချကြွေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မိုးကတော့ မြိန်ရည်ရှက်ရည် မစားပါဘူး။ ငူတူတူကြီးဖြစ်နေတယ်။ နေရာဟောင်းကို ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လဲ ဖြုန်းစားကြီးဆိုတော့ နေရာစိမ်းနေပုံရပါတယ်။
ဘာကိုမှ မှတ်မိပုံရဟန်မတူဘူး။ ဆရာတော်ကိုဘဲ မှတ်မိနေတယ်။
ဆရာတော်လဲ ရွာသားတွေ အကူအညီနဲ့ နေ့ချင်းပြီး အောင်မိုးကိုထားဖို့ မျောက်အိမ် ခပ်ကြီးကြီးကို ကျောင်းမှာ အသင့်ရှိတဲ့ ပျဉ်တွေ တိုင်တွေ သွပ်တွေနဲ့ ဆောက်လုပ်စေတယ်။ မျောက်အိမ်ကို ဆောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ အောင်မိုးကို လွတ်မထားရဲပါဘူး။သရက်ပင်မှာ ကြိုးနဲ့ဘဲ ချည်ထားရတယ်။ တော်ကြာ စိတ်ကြောင်ပြီး ထွက်ပြေးသွားရင်ဒုက္ခ။ အစားအသောက်နှင့်ရေကို အဆင်သင့်ချထားပေးတယ်။
စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ ဆိုသလို ရွာသားတွေရဲ့  စုပေါင်းအားနဲ့ ဆောက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်မိုးရဲ့  နေအိမ်လေးဟာ ညနေပိုင်းလောက်မှာ ကောင်းမွန်စွာဘဲ ပြီးဆုံးအောင်မြင်သွားပါတယ်။ အကာ အမိုး တံခါး ဟီးရီးခိုဖို့ တန်း ကစားစရာ အစားအစာနှင့်ရေထည့်ဖို့ခွက်စတဲ့ မျောက်တွေရဲ့  လိုအပ်ချက်တွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။
အောင်မိုးရဲ့  အိမ်လဲ လုံးဝပြီးစီးသွားပြီ။ အောင်မိုးလဲ ကြိုးတန်းလန်းနဲ့နေရတာ ငြီးငွေ့နေလောက်ပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ အောင်မိုးကို ကြိုးဖြုတ်ပြီး သူ့နေအိမ်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အစားအစာတွေ ရေတွေပါ အဆင်သင့်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ပြီးတော့ အောင်မိုး အေးအေးဆေးဆေးအနားယူဖို့ တံခါးပိတ်ပေးလိုက်တယ်။ အောင်မိုး လူမှန် နေရာမှန် (အဲ... တိရစ္ဆာန်မှန် နေရာမှန်) ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီလေ။
အောင်မိုးကို သူ့နေအိမ်ထဲကိုသွင်းပြီးနောက် ဆရာတော်ကျောင်းပေါ်တက်ပြီး ဘလက်ဘော (Blackboard)ကြီးတစ်ချပ် မယူလာတယ်။ အဲဒီ ဘလက်ဘောကြီးကို အောင်မိုးရဲ့  နေအိမ်မှာ သံနဲ့ ခိုင်ခံစွာ ရိုက်ကပ်လိုက်တယ်။ မြေဖြူတစ်ချောင်းကိုယူ အလယ်တည့်တည့်ရိုက်ချိုးလိုက်ပြီး အဲဒီမြေဖြူအကျိုးနဲ့ အလျားလိုက် ဘလက်ဘောပေါ်မှာ ဆရာတော် စာလုံးကြီးကြီး ခြောက်လုံးတိတိ ရေးချလိုက်တယ်။
မန္တလေးပြန်အောင်မိုးကို အဆုံးသတ်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ အဆုံးသတ်လို့ ရနေပြီ။ ဒါပေမဲ့... ဒါပေမဲ့ အောင်မိုးရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဒီနေရာမှာတင် အဆုံးသတ်လို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။ ထူးဆန်းစွာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အောင်မိုးရဲ့  ဇာတ်လမ်းလေးဟာ စိတ်ဝင်စားစရာအတိဖြစ်ခဲ့လို့ပါဘဲ။
အပိုင်း (၈) ဆက်ဖတ်ပါ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 22:56 1 comment:
"ဒကာကြီး... ကျုပ်ပို့ထားခဲ့တဲ့ မျောက်က ဘာဖြစ်လို့ အခုလို အံသြရလောက်အောင် ပိန်သွားတာလဲ။ ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားမျောက်တွေက အုပ်စုလိုက် အနိုင်ကျင့်လို့လား"
ဆရာတော်က တာဝန်ခံနှင့်တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းလိုက်တယ်။ မေးလိုက်တဲ့အသံက တုန်နေသယောင်ယောင်။ ဒီလို ပုံစံမျိုးနှင့် အောင်မိုးကို ဆရာတော် မမြင်တွေ့လိုပါ။ အောင်မိုးပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတာကိုဘဲ ဆရာတော် မြင်တွေ့ချင်တယ်။ အခုအောင်မိုးပုံစံက နွေခေါင်ခေါင်အလယ်က အရိုင်းပြိုင်းပြိုင်း ခြောက်ကပ်ကပ် သစ်ခြောက်ပင်ပုံစံမျိုး။ ရွာဦးကျောင်းမှာ အောင်မိုးနေတုန်းကဆို အလွန်အဆော့သန်တဲ့ကောင်။ အခုတော့ မှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့။ မျောက်နဲ့ကို မတူတော့ဘူး။ ကျားတစ်ကောင်ရှေ့ ရောက်နေတဲ့ သမင်ပေါက်စလေးလို။
မျောက်မှန်ရင် အငြိမ်မနေရဘူး။ အမြဲတမ်း ပြေးလွှားဆော့ကစားနေရမယ်။ ဒါကြောင့်မို့လဲ ကလေးတွေအဆော့သန်တဲ့အခါ မင်းကတော့ မျောက်လောင်းဘဲလို့ တင်စားပြောဆိုတတ်ကြတာမဟုတ်လား။
မျောက်ဆိုမှတော့ မျောက်ရဲ့  ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထိန်းသိမ်းသင့်တာပေါ့။ အခု အောင်မိုးက မျောက်နဲ့မှ မတူတော့တာ။
"ဆရာတော်ရဲ့  မျောက်အကြောင်းတော့ မပြောချင်ပါဘူးဘုရား။ ဆရာတော် သူ့ကို ဒီမှာထားရစ်ပြီး ပြန်သွားပြီးကထဲက အစားအသောက်လဲ ကောင်းကောင်းမစားတော့ဘူး။ တစ်ခြားမျောက်တွေနဲ့လဲ သိပ်ရောရောနှောနှောမနေဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှဘဲ တစ်ခြားမျောက်တွေလို ဆော့ကစားတယ်။ များသောအားဖြင့် ခပ်ကုပ်ကုပ်နေတော့တာဘဲ။ တပည့်တော်တို့ အချင်းချင်းတောင် အောင်မိုးက ဘုန်းကြီးကျောင်းက ထွက်လာတာဆိုတော့ တရားပေါက်သွားပြီထင်တယ်၊ အဆော့မမက်တော့ဘူး လို့ စနောက် ပြောဆိုနေကြသေးတယ်။ ထူးဆန်းတာက ဒီဥယျာဉ်ထဲ တစ်ခြား ကိုရင် ဦးဇင်းတွေလာရောက်ကြည့်ရှုရင် အောင်မိုးက အဲဒီဦးဇင်း ကိုရင်တွေကို လိုက်ကြည့်နေတတ်တယ်။ ဆရာတော်နှင့်ဆရာတော်ရဲ့  ရွာဦးကျောင်းကို လွမ်းနေပုံရပါတယ်ဘုရား။ ဒီလိုပုံစံမျိုးနှင့် လတွေ ရက်တွေ များလာတော့ အခုလို ပိန်ခြုံးသွားတာပါဘဲဘုရား"
ဥယျာဉ်တာဝန်ခံရဲ့  စကားတွေကို ကြားပြီး ဆရာတော် ဆို့နင့်လာတယ်။ စိတ်မကောင်း အရမ်းဖြစ်သွားတယ်။
အောင်မိုးရဲ့  ဖြစ်အင်ကို ကြည့်ပြီး မျက်ရည်မလည်မိအောင် ကြိုးစားထိန်းထားရတယ်။ ကောင်းစားစေချင်လို့ မြို့ တော်ကို ပို့လိုက်မှ သူ့ကို ဆင်းရဲတွင်းထဲ ပစ်ချလိုက်သလို ခံစားမိတယ်။ အမှန်တကယ်ဆို ဥယျာဉ်တာဝန်ခံတွေကလဲ အောင်မိုးကို အထူးဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက အောင်မိုးရဲ့  Homesick ရောဂါပေါ့။ ဒါကြောင့် သူပိန်ခြုံးသွားတာ။
"ဒီအတိုင်းထားလို့ မဖြစ်ချေဘူး။ အောင်မိုး သေသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါရွာဦးကျောင်းကို ပြန်ခေါ်သွားမယ်။
ဟိုရောက်ရင် ကျကျနနထားပြီး စပယ်ရှယ်ကျွေးမွေးထားမယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ကြိုက်သလိုနေစေမယ်။
ဒါမှ သူပျော်ရွှင်ပြီး ၀၀ဖြိုးဖြိုး ပြန်ဖြစ်လာမှာ"
ဆရာတော် စဉ်းစားလို့ အပြီးမှာဘဲ တာဝန်ခံကို စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်။
"ဒကာကြီး.. အောင်မိုးကို ဆရာတော် ပြန်ခေါ်သွားမယ်။ ဒကာကြီးတို့ စီစဉ်ပေးပါ"
"တင်ပါ့ဘုရား... တပည့်တော်တို့လဲ သူ့ကိုကြည့်ပြီး သနားနေကြပါတယ်။ ဆရာတော်ပြန်ခေါ်သွားရင် သူအရင်ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်လာဖို့ များပါတယ်။ ပြန်ခေါ်သွားပါဘုရား။ တပည့်တော်တို့ လှောင်ချိုင့်လုပ်ပြီး စီစဉ်ပေးပါ့မယ်။ ဆရာတော် ရွာကိုပြန်ကြွမဲ့ရက်မှာ လာယူပါဘုရား"
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဆရာတော် ပြန်ကြွမဲ့ရက်မှာ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကိုသွားပြီး သူတို့ စီမံပေးတဲ့အတိုင်း အောင်မိုးကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။
အောင်မိုးရဲ့  ပြန်တော်ပြန်ခရီးဟာ အလာတုန်းက ပုံစံအတိုင်း ရထားတစ်တန် ကားတစ်တန် စီးရပါတယ်။ အဆင်သင့်အကြောင်းကြားထားတဲ့ ရွာကလူတွေက ကားဂိတ်ကတစ်ဆင့် ထမ်းပိုးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက် တစ်ညအိပ်အပြီးမှာ မူလနေရာ သူ့ဘုံဗိမာန် (နမ္မားရွာဦးကျောင်း) သို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။ သူ့ကို မန္တလေးအပို့တုန်းကလောက် လူမစည်ကားပေမဲ့ လူအများစုကတော့ အောင်မိုးကို ရွာဦးကျောင်းကနေပြီး ကြိုဆိုကြည့်ရှုနေကြလေရဲ့ ။
(အပိုင်း ၇ ဆက်ဖတ်ပါ)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 21:23 1 comment:
အောင်မိုးကို သတိရတစ်ချက် မရတစ်ချက်နှင့် ဆရာတော် နေထိုင်လာခဲ့တာ ရက်တွေ လတွေ အတော်လေး ကြာညောင်းခဲ့လေပြီဘဲ။ အောင်မိုးရဲ့  နေအိမ်လေးလဲ ပျဉ်ပုံဘ၀နှင့်ပြားပြားဝပ်ဝပ်။ သူ့နေအိမ်နေရာမှာ မြက်ပေါင်းပင်တို့ အစားထိုးနေရာယူထားကြလေရဲ့ ။ ရွာသူရွာသားတွေလဲ အောင်မိုးကို မေ့သလောက်ဖြစ်နေပြီ။ သူနှင့်ကစားဖက် ခွေးတွေ ကြောင်တွေလဲ အောင်မိုးကို သတိရနေတဲ့ပုံမပေါက်ကြတော့။ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေလဲ အောင်မိုးကို ဖွတ်မေ့ ပဒတ်မေ့ မေ့ကုန်ကြရောပေါ့။
အောင်မိုးကို သတိရတဲ့စိတ်တွေကို အချိန်စက်နာရီတို့က ၀ါးမြိုပစ်လိုက်ကြလေပြီ။ ရော်ရွက်ဝါတို့ မြေခပြီး မိုးပေါက်တွေ တစ်ဖွဲဖွဲရွာသွန်းဖြိုးပြီးတဲ့နောက် နှင်းဖွဲလေးတွေတောင် ဝေနေကြပြန်လေပြီ။ ဒါဆို ရာသီစက်ရဟတ် တစ်ပတ်ပြန်လည်လာပြီဆိုတဲ့ သင်္ကေတဘဲပေါ့။ တစ်နှစ်ဆိုတာ ဘာမှ မကြာလိုက်ဘူးလို့ ထင်ရပေမဲ့ အဲဒီ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်လေးအတွင်းမှာ လူတွေရဲ့ စိတ် (အောင်မိုးကို သတိရတဲ့စိတ်)တွေကတော့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့လေပြီတကား။
အောင်မိုးအကြောင်း ပြောတဲ့လူ မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ။
ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဘဲပေါ့လေ။ ကြာလာရင် အားလုံးမေ့သွားတတ်ကြတာ လူတွေရဲ့  သဘာဝဘဲ မဟုတ်လား။
အောင်မိုးအကြောင်းကို အသာလေးထားဦး။ ဗြိတိသျှတော်ဝင်မင်းသမီးဟောင်း ဒိုင်ယာနာ၊ ပါကစ်စတန်ခေါင်းဆောင် ဘူတို၊ ဂျပန်ကိုဘေး ငလျင်၊ မြန်မာ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်၊ တရုတ်ငလျင်စတဲ့ ကြီးကျယ်လှတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတောင် အချိန်က ၀ါးမျိုပစ်လိုက်ပြီမဟုတ်လား။
အောင်မိုးကို မန္တလေးပို့ပြီး နောက်တစ်နှစ်ခန့်အကြာလောက်မှာ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနှင့်ဆရာတော် မန္တလေးကို ဆင်းလာခဲ့တယ်။ မန္တလေးရောက်လာပြန်တော့လဲ အောင်မိုးကို သတိမရဘဲ မနေနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အောင်မိုးရှိရာ ရတနာပုံဥယျာဉ်ထဲ သွားဖို့ ဆရာတော် ထွက်လာခဲ့တယ်။ စိတ်ထဲကတော့ အောင်မိုး. အခုလောက်ဆို ပျော်နေလောက်ပြီ။ ငါ့ကိုလဲ မှတ်မိပါ့ဦးမလားမသိဘူး ဆိုပြီး စိုးရိမ်နေလေရဲ့ ။
"အောင်မိုး ကံကောင်းပါတယ်။ ဥယျာဉ်အလည်လာတဲ့သူတွေက အစာကျွေးလိုက်၊ ဥယျာဉ်တာဝန်ခံတွေက အစာကျွေးလိုက်၊ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်လိုက်ပါးလိုက်ဆိုတော့ ၀ဖြီးနေမှာဘဲ။ ငါ့ကို မမှတ်မိလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သူပျော်နေတာကို ငါမြင်ရရင် ကျေနပ်ပါပြီ"
ဆရာတော် စဉ်းစားခန်းဖွင့်ပြီး ရတနာပုံဥယျာဉ်ထဲ ၀င်လာခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ ကြည့်စရာတွေကို ဆရာတော် စိတ်မ၀င်စားနိုင်ဘူး။ အောင်မိုးရှိတဲ့နေရာကိုဘဲ တန်းပြီးသွားလိုက်တယ်။ တွေ့မြင်ချင်ဇောက ကြီးမားနေပြီလေ။
၀၀တုတ်တုတ် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြစ်နေမဲ့ အောင်မိုးကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်နေမိတယ်။
အောင်မိုးရဲ့  နေရာ မျောက်အိမ်တွေဘက်ကို ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်တွေဝေသွားတယ်။ မျောက်တွေ အများကြီးထဲမှာ အောင်မိုးကို ဆရာတော် ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။
"အောင်မိုးရေ... အောင်မိုးရေ... အောင်မိုးရေ..."
ဆရာတော် အသံကိုမြင့်ပြီး ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး အော်ခေါ်လိုက်တယ်။ ရုပ်ခပ်ဆိုးဆိုး အရိုးပြိုင်းပြိုင်း မျောက်တစ်ကောင် ဆရာတော့်အနား ပြေးလာတယ်။ ဆရာတော့်ကို သေသေချာချာစိုက်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ကွိ ကွိ ကွိ ဆိုပြီး အသံပြုတယ်။ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့မှ အဲဒီမျောက်ဟာ အောင်မိုးကိုယ်တိုင်ဘဲ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
"ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲ.. သား အောင်မိုးလေးရယ်"
မျက်တွင်းတွေက ဟောက်ပက်ပက်၊ အရိုးပေါ်အရေတင်ရုံ ချိနဲ့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ အောင်မိုးရဲ့  ရုပ်ပုံကို ဆရာတော် အတော်လေး ပုံဖမ်းယူရတယ်။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာလဲ လွန်ရောဘဲ။ "နေမကောင်းများ ဖြစ်နေသလားမသိဘူး။ မဖြစ်ချေဘူး။ တာဝန်ခံနှင့်တွေ့ပြီး မေးမြန်းတာကောင်းတယ်" လို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး ဆရာတော် တာဝန်ခံဆီသွားပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်တယ်။
(အပိုင်း ၆ ဆက်ဖတ်ပါ)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:01 No comments:
ကိုရင်ကျောင်းသားတွေလဲ အောင်မိုးကို ၀ိုင်းပြီး ကြည့်နေကြတယ်။ ကြောင်ကလေးတွေကတော့ ဘယ်ကို ပျောက်သွားကြတယ်မသိဘူး။ အောင်မိုးအဖြစ်ကို မမြင်ရက်လို့ တိမ်းရှောင်သွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခွေးတွေကတော့ တစ်အင့်အင့် အသံပြုပြီး အောင်မိုးရဲ့  လှောင်အိမ်နား ပတ်ချာလှည့်ပြီး ပြေးလိုက်၊ ဆရာတော့်ထံပြန်လာလိုက်နဲ့ အသနားခံနေကြသယောင်ယောင်။ မြင်ကွင်းကတော့ တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ။
အော်... ကျနော်လဲ အတွေးတစ်ခုပေါက်မိတယ်။ သားသမီးတွေကို ကောင်းစေချင်လို့ အိမ်ထောင်ချပေးတဲ့ မိဘတွေမှာလဲ သားသမီးတွေရဲ့  ရှေ့ ရေး ကောင်းစားရေးအတွက် လုပ်ပေးလိုက်ရပေမဲ့ စိတ်ကောင်းကြရှာမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အချိန်ကစပြီး ခွဲခွါကြရတော့မှာကိုး။
အခု ဆရာတော်လဲ အောင်မိုးကောင်းစားရေး အတွက်ပြုလုပ်ပေးရပေမဲ့ တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဆရာတော့်မျက်နှာ မသာယာပါဘူး။ တိမ်တောင်တိမ်စိုင်တွေ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ မိုးကောင်းကင်လိုပါဘဲ။ ဆရာတော့်မျက်နှာ မှုန်ကုတ်ကုတ် ဖြစ်နေတယ်။
"ကဲ.. သွားဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ ကားဂိတ်ကို သွားကြစို့"
ဆရာတော့် စကားအဆုံးမှာဘဲ အောင်မိုးကို ထည့်ထားတဲ့ လှောင်အိမ်ကို ထမ်းယူပြီး ကားဂိတ်ကို ထွက်ခွါလာခဲ့ကြပါတယ်။ အောင်မိုးရဲ့  ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ မန္တလေးအသွားးခရီးလေးဟာ အလွန်မှဘဲ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်တို့နဲ့ ပြည့်နှက်နေလေရဲ့ ။ လိုက်ပို့ကြတဲ့သူတွေကလဲ စည်စည်ကားကားပါဘဲ။
အောင်မိုးရဲ့  ခရီးဟာ သူ့အတွက် အထီးမကျန်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ ခရီးလေ။
ကားဂိတ်ကို ရောက်ပြီးမကြာခင်မှာဘဲ ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း ဘတ်စ်ကား ၀င်ရောက်လာတယ်။ အောင်မိုးကို ကားပေါ်တင်ပြီး ကောလင်းကို သွားတယ်။ ကောလင်းကနေ မြစ်ကြီးနား-မန္တလေးမီးရထားကို စီးပြီး မန္တလေး ဆင်းလာခဲ့တယ်။ မန္တလေးရောက်တဲ့နေ့မှာဘဲ အောင်မိုးကို မန္တလေး ရတနာပုံတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲ အရောက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ ဆရာတော် တိရစ္ဆာန်ရုံက အပြန်မှာတော့ အောင်မိုးလေးခမျာ အိမ်သစ် နေရာသစ် အဖော်အသစ်တွေကြားထဲမှာ မျက်စိလေး ကလည်ကလည်နဲ့ ကျန်ရစ်နေခဲ့လေရဲ့ ။
ခွဲခွါကာစဆိုတော့ ဆရာတော်လဲ လုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူး။ အောင်မိုးကိုဘဲ သတိရနေမိတယ်။ ဆရာတော် မန္တလေးမှာ ကြာကြာနေချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။ မဟာမြတ်မုနိဘုရားဖူးပြီး နောက်တစ်နေ့မှာဘဲ မီးရထားနဲ့ နမ္မာရွာဦးကျောင်းကို ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ရွာဦးကျောင်းအ၀င်ဝကို ရောက်ပြီဆိုရင်ဘဲ တွေ့မြင်နေကျ အောင်မိုးရဲ့  နေရာလေးတွေ ကြည့်ပြီး
အောင်မိုးရဲ့ ဆော့ကစားဟန်လေးတွေကိုမြင်ယောင်လာတယ်။ ဆရာတော်ကို အရမ်းခင်တွယ်နေတဲ့ အောင်မိုး ဆရာတော် ဘယ်အရပ်ကဘဲ ပြန်လာပြန်လာ ကြိုဆိုနေကျလေ။ အခုတော့ အောင်မိုးရဲ့  အရိပ်အယောင်တောင် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိတော့။ ဆရာတော့် ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဟာတာတာဖြစ်လာတယ်။ သံယောဇဉ်တွေလေ။ သံယောဇဉ်တွေပေါ့။ လူ တိရစ္ဆာန် သက်ရှိ သက်မဲ့ တစ်ခုခုအပေါ် သံယောဇဉ်ထားမိရင် အတော်လေး ဖြတ်ပစ်ရ ခက်ပါလား။
ဆရာတော်လဲ အောင်မိုးကို သတိရတဲ့စိတ်ကများနေပေမဲ့ အောင်မိုးကောင်းစားရေးကို ရှေးရှုပြီး မန္တလေးကို ပို့ပေးခဲ့တဲ့သူ့လုပ်ရပ်အတွက် နောင်တ ရမနေပါဘူး။ သတိရစိတ်ကလေးကို ထုတ်ပယ်လိုက်ကာ စိတ်ထဲကဘဲ တိုးတိုးလေး ဆုတောင်းနေမိလိုက်တယ်။
"အောင်မိုးလေး... နေရာသစ်မှာ.. မိတ်သစ်ဆွေသစ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ပါစေ"
(အပိုင်း ၅ ဆက်ဖတ်ပါ)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:17 1 comment:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:33 1 comment:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 22:50 1 comment:
ကျနော်က တောထဲကပေါက်ဖွားလာတဲ့ တောသားတစ်ယောက်ဆိုတော့ မြို့ ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်တာနဲ့ ဘာမှ စဉ်းစားမနေတော့ဘူး။ အထင်ကြီးပစ်လိုက်တော့တာပါဘဲ။ မြို့ ကြီးသူ မြို့ ကြီးသားတွေကို အထင်ကြီးတဲ့ရောဂါ၊ ပညာတတ်တွေကို အထင်ကြီးတဲ့ရောဂါ၊ အဲဒီရောဂါနှစ်မျိုးက ကျနော့်ဆီမှာ စွဲကပ်နေတာကြာပြီလေ။
သူက ရန်ကုန်က၊ ဘီအေဘွဲ့ ရပြီးသား ပညာတတ်တစ်ယောက်ဘဲ ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်ရင် ကျနော် အထင်မကြီးဘဲ မနေနိုင်ဘူး။ မြို့ ကြီးသားလဲဖြစ်ပြန် ပညာတတ်လဲ ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ ကျနော့်မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်အိမ်လေးတွေလည်နေတဲ့အထိ အထင်ကြီးပစ်လိုက်ရော။
စပါးသိမ်းပြီးခါစတွေမှာဆိုရင် ကျနော်တို့ရွာကလူတွေ ရန်ကုန် မန္တလေးဘက် ဘုရားဖူးဆင်းလေ့ရှိကြတယ်။
သူတို့ ဘုရားဖူးတဲ့ဆီက ပြန်လာပြီဆိုရင် ကျနော်တို့တစ်သိုက်ကတော့ သူတို့အိမ်သွားပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ သူတို့ဘုရားဖူးအတွေ့အကြုံတွေကို နားထောင်ဖြစ်ကြတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးအကြောင်း၊ မန္တလေးနန်းတော်ကြီးအကြောင်းစုံလင်နေတာပါဘဲ။ နားအရသာရှိလိုက်တာဗျာ။ မပြောပါနဲ့တော့။ နားထောင်လို့တောင် အားမ၀နိုင်ဘူး။
ရန်ကုန် မန္တလေးတွေမှာဆို အမြဲတမ်း လူတွေ အရမ်းစည်ကားနေတာဘဲတဲ့။ ဒို့ရွာဦးကျောင်းဘုရားပွဲတော်ရက်ကြီးမှာတောင် ရန်ကုန် မန္တလေးမြို့ ကြီးတွေရဲ့  ပုံမှန်သွားလာနေကြ လူတွေလောက် မများဘူးတဲ့။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် သွားချင်စိတ်တွေ တစ်ဖွားဖွားပေါက်နေမိတယ်။
ကျနော်တို့ တောသားတွေက မြို့ ကြီးတွေကို အထင်ကြီး၊ မြို့ ကြီးသားတွေက နိုင်ငံခြားကို အထင်ကြီးနဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလဲ အထင်ကြီးတဲ့ ရောဂါတွေ စွဲကပ်ကူးစက်ခံရသူတွေ မနည်းလောက်ဘူး။ ကြီးလဲ ကြီးသင့်တာကိုးဗျ။ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှ ပြည်တွင်းဖြစ်က ခပ်ရှားရှားမဟုတ်လား။
နိုင်ငံခြားကပြန်လာသူတွေဆို လူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်လို့။ နာမည်ကျော်ရင် မြန်မာတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်တတ်တယ် လို့ ဆိုရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ။ ယိုးဒယားပြန် ဘာမင်းသမီးဆိုလဲ အထင်ကြီးဖို့ ၀န်မလေးဘူး။ ဆိုဗီယက်ပြန်ဘာဆက်ကပ်ဆိုလဲ ကျနော်တို့က ထိပ်ဆုံး။ ဘိလတ်ပြန် ဘယ်သူဆိုပြန်ရင်လဲ သူ့ထက်ငါဦး။
အထင်ကြီးအားပေးတတ်ကြပုံကို ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ထမင်းနှပ်မှန်အောင် မစားရပေမဲ့လဲ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပြီးသွားရင် နိုင်ငံခြားပြန်စာရင်းဝင်သွားပြီလေ။ လူတွေ အထင်အမြင်ကြီးအောင် ဟန်တပြပြနဲ့ နေလို့ရပြီမဟုတ်လား။
အဲဒီလို အထင်ကြီးတတ်ကြတာ အရမ်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ထက်သာမယ်ထင်ရင် အထင်ကြီးပစ်လိုက်ကြတာဘဲ မဟုတ်လား။ ကျနော်တို့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုတောင် နိုင်ငံခြားက ပြန်ရောက်လာမှ ကြည်ညိုအထင်ကြီးကြတဲ့ သူတွေ များလာတာကလား။ ကျနော် ရမ်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဘုရားဖြစ်ခါစက ဘုရားရှင်ကို အထင်ကြီးကြတဲ့သူတွေက ခပ်နည်းနည်းရယ်။
ဘယ်အထင်ကြီးကြပါ့မလဲ။ တောကြိုတောင်ကြားထဲမှာဘဲ ဘုရားဖြစ်ခဲ့တာကိုး။
ဘုရားဖြစ်ပြီး ၇ ၀ါမြောက်မှာ မယ်တော်မိနတ်အမှူးရှိတဲ့ နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းကို တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ အဘိဓမ္မာတရားသွားဟောတယ်။ ၀ါတွင်းသုံးလကာလပတ်လုံး တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ တစ်လစပ် အဆက်မပြတ်ဟောကြားတယ်။ ၀ါကျွတ်တဲ့နေ့ (သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့) မှာ ဘုရားရှင်ဟာ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ကနေပြီး သင်္ကဿနဂိုရ်ကို ရွှေ ငွေ ပတ္တမြား စောင်းတန်းသုံးသွယ်နဲ့ ဆင်းသက်တော်မူတယ်။
ကြိုဆိုလိုက်ကြတဲ့ လူတွေ နတ်တွေ အများကြီးဘဲဗျာ။ မီးရှူး မီးပန်း ဆီမီး တံခွန် ကုက္ကား မလေးဘွားစတဲ့ အလှအပတန်ဆာများကိုယ်စီကိုင်ဆောင်ပြီး ကြိုဆိုကြတယ်။ ဒေ၀ါဝင်း ရာဇာဝင်းတွေကလဲ အစီအရီ ခင်းကျင်းထားကြလေရဲ့ ။ အဲဒီ ကြိုဆိုပွဲကို အကြောင်းပြုပြီး သီတင်းကျွတ်ဆီမီးထွန်းပွဲဆိုတာ ဖြစ်ခဲ့တာဗျ။
အဲဒီလို နိုင်ငံခြားက (တာဝတိံသာနတ်ပြည်က) ပြန်ရောက်လာပြီးမှ ဘုရားရှင်ကို အထင်ကြီးကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ ပိုများလာတယ်။
နိုင်ငံခြားကို အထင်ကြီးတဲ့ ရောဂါက အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင်လက်ထက်ကထဲက ပေါ်ပေါက်နေပြီပေါ့ဗျာ။
စာရေးရင်းနှင့် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း ကျနော်ကိုယ်တိုင် သတိမထားလိုက်မိဘူး။ သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်ရေးချင်တာက မန္တလေးပြန်အောင်မိုး အကြောင်းပါ။ မန္တလေးပြန်အကြောင်းရေးရင်းနှင့် နိုင်ငံခြားပြန်အကြောင်းရောက်သွားလို့ ထည့်ရေးမိလိုက်တာပါ။
အပိုင်း ၂ ကို ဆက်လက် ဖတ်ပေးရင်တော့ ကျေးဇူးကုဋေကုဋာပါဘဲလို့။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 21:02 No comments:
နောက်ပိုင်း ကဇာတ်ကို ကြိုးမရုပ်နိုင်ဘဲ
မိုးချုပ်နေ၀င် ကြယ်လေးတွေ အကမှာ
သူ့ကို မထားတော့ပါဘူး တဲ့။
ရိုးသားတဲ့ အရိပ်အယောင်တော့ မင်းဆီမှာတွေ့ရတယ်။
အဖြစ်က မနှစ်ကလို မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့
မျက်လုံးဆိုတာ နှလုံးသားရဲ့  မှန်သားပြင်
မယုံရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်အုံး
မင်း မျက်လုံးထဲမှာ အဖြေရှိနေတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 09:153comments:
မင်းဟာ ကို့ရဲ့  လမ်းပြကြယ်လေးပါ
ကိုဟာ အမှောင်လမ်းတွေထဲမှာ စမ်းတ၀ါးဝါးဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
မင်းဟာ ကို့ရဲ့  စွမ်းအင်လေးပါ
ကိုဟာ ရှင်သန်နိုင်မှာ မဟုတ်တာသေချာတယ်။
မင်းဟာ ကို့ရဲ့  အိုအေစစ်ကလေးပါ
ကိုဟာ ဘ၀အမောတွေကြားထဲ နစ်မြောနေမှာ သေချာတယ်။
မင်းဟာ ကို့ရဲ့  နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးပါ
ကိုဟာ အေးချမ်းမှုတွေ ကင်းဝေးနေမှာ သေချာတယ်။
မင်းဟာ ကို့ရဲ့  အသက်သွေးကြောလေးပါ
ကိုဟာ သုံးမရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
မင်းဟာ ကို့ရဲ့  အနာဂါတ်ကလေးပါ
ကိုဟာ အနာဂါတ်မဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
မင်းဟာ ကို့ရဲ့  အချစ်ကလေးပါ
ကိုဟာ အချစ်ဆိုတာကို သိမှာမဟုတ်တာ သေချာတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 21:433comments:
ဒေါက်.. ဒေါက်.. ဒေါက်
ရန်သူလား မိတ်ဆွေလား မကွဲပြားပေမဲ့
ထသွားပြီး တံခါး အမြဲတမ်းဖွင့်ပေးနေကျ
တစ်ခွန်းဆို တစ်ခွန်းမှ နှုတ်က မဟခဲ့ပါဘူး။
ကျနော် နဲနဲလေးမှ သတိမထားချင်ဘူး။
ဖျက်ဆီးပြီး ကျနော့်ဥစ္စာတွေကို ယူ
အိမ်အိုပေမဲ့ လူကတော့ ပျိုနေဆဲပါ
ယောင်မှားပြီး လမ်းကြုံရင် ဂျမ်းပုံ အပါအ၀င်
၀င်ခဲ့ကြပါဦးလို့ အနူးအညွတ် မဦးမချွတ်
အထူး (အထူး) ဧည့်ဝတ်ပြုချင်လွန်းလို့။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:56 1 comment:
ကာရန်မဲ့ ကဗျာတွေ ရေးသီဖွဲ့ရင်း
မညီညာတဲ့ခြေလှမ်းတွေရဲ့  စည်းချက်မှန်မှန်ပြေးဆော့သံကို နားဆင်ရင်း
အချိုးအစားမကျတဲ့ လက်ချောင်းတွေရဲ့ ကြားထဲ
နေ့လား ညလား ညလား နေ့လား
နေ့မအား ညမအား ညမအား နေ့မအား
ကျနော် ကောင်းကောင်း မသိခဲ့ပါဘူး။
အသစ်စက်စက် ၀တ်ရုံလွှာကို အစားထိုး
ငါ့လှေ ငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်
သိပ် နောက်တတ်ပေမဲ့ သိပ်ကြောက်တတ်ပြီထင်ရဲ့ ။
မြင်ရက်စရာ ထင်ရက်စရာ နှင်ရက်စရာမရှိ
သံစဉ်လွတ် တီးလုံးတွေရဲ့  အောက်မှာ
ကဗျာလွတ် အကကို ကပြအသုံးတော်ခံရင်း
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:14 No comments:
ငှက်ဖျားဒဏ်ကို အလူးအလဲခံစားရနေရတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကို ဆေးရုံမှာ သွားဖူးဘူးတယ်။ ငှက်ဖျားမှတကယ့်အပြင်းစား ငှက်ဖျားဘဲ။ ဗန်းမော်ဘက်ကို တရားဟောသွားရင်း ထိလာခဲ့တဲ့ ငှက်ဖျားတဲ့။ ကြောက်စရာအရမ်းကောင်းတယ်။ ဒီလောက် သီလ သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ငှက်ဖျားဒဏ်ခံနေရစဉ်မှာ ပါးစပ်ထဲတွေ့ရာတွေလျောက်ပြောတယ်။ ကျင်ငယ်စွန့်ရင်တောင် (ကန်တော့်ပါရဲ့ ) အကူအညီနဲ့ သေချာ ကျင်ငယ်ဘူးထဲ ထည့်ပေးပြီးမှ စွန့်ရတယ်။ ကျင်ငယ်စွန့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို ခံစားလို့ရပေမဲ့ လူနာစောင့်တွေရဲ့  ကျင်ငယ်စွန့်တဲ့အခါ ကူညီပေးမှုကို ဆရာတော်သတိထားမိပုံမပေါ်ဘူး။
ဆရာဝန်တွေရဲ့  စေတနာနှင့်ဆေးစွမ်းတွေရဲ့  ထက်မြက်မှုကြောင့် ဆရာတော့်ရောဂါ နလန်ထူလာပါတယ်။ နေကောင်းခါစမှာ ဆရာတော်ကျင်ငယ်သွားချင်တယ်လို့ ပြောတော့ လူနာစောင့်တွေက ဆရာတော်ကို ကူညီဖို့ လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော် လက်မခံတော့ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ကျင်ငယ်စွန့်ဖို့ နေရာကို မခေါ်တော့ဘူး။
သတိဝင်သွားပြီလေ။ ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ ရှက်ပြီပေါ့ဗျာ။
ကျန်းမာရေး မကောင်းစဉ်ကသာ ဦးဏှောက်ထဲငှက်ဖျားပိုးရောက်လုနီးနေလို့ ဘာမှမသိဘဲ လူနာစောင့်တွေ ပြုစုသမျှကို ဆရာတော် သတိမထားမိခဲ့တာပါ။ နေကောင်းတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အနားမကပ်ခံတော့ပါဘူး။
ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါကို ခံစားရတဲ့ ဆရာတော်ဟာ အဲဒီငှက်ဖျားရောဂါက ပြန်ကောင်းလာပြီး သူ့ကျောင်းသူပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်။
"တော်သေးတယ်.. ဒီတစ်တောင်ကို ကျော်ခဲ့နိုင်ပြန်ပြီ" တဲ့။
ဒီနေ့ နေ့လည်နှစ်နာရီလောက် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေခိုက် အပြင်တံခါးဘဲလ်မြည်သံ ကြားလိုက်ရတယ်။ ဧည့်သည်တစ်ယောက် (ဒါမှမဟုတ်) စာပို့သမားတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်မှာပါ လို့ ကျနော်ထင်ခဲ့တယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။
"ကိုကိုမောင် ကိုကိုမောင်ရေ့ .. မင်းအတွက်စာ.. မင်းကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးယူရမယ်တဲ့.."
ကျနော် တံခါးပေါက်ဝကို ထသွားလိုက်တယ်။ စာပို့တဲ့သူက ခါတိုင်းပို့နေကျသူမဟုတ်ဘူး။ ခါတိုင်းဆို ကိုယ်စားလက်မှတ်ထိုးလို့ ရတယ်၊ ဒီနေ့မှ ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးယူရမှာပါလိမ့် လို့ ကျနော် စဉ်းစားမိတယ်။ ပြီးတော့ အိုင်ဒီ ပြရဦးမယ်တဲ့။ ကျနော့်လဲ ကျနော့်ပတ်စ်ပို့ယူပြီး ပြလိုက်တယ်။
လက်မှတ်ထိုးဖို့ နေရာက ခါတိုင်းလို စာရွက်ပေါ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖန်သားပြင်လေးပေါ်မှာ သူယူလာတဲ့ ခဲတံပုံစံ အချောင်းကလေးတစ်ချောင်းနဲ့ ထိုးလိုက်ရတယ်။
လက်မှတ်ထိုးပြီး စာအိပ်ခပ်ရှည်ရှည်လေးကို ပေးခဲ့တယ်။ သူပြန်သွားပြီးစာအိပ်ကို ဖောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။
"ဟိုက်ရှားဘား..... စာအိပ်ထဲမှာ ကဒ်ကလေးတစ်ကဒ်ပါလာပါလား။ ဘာများပါလိမ့်"
သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ ကျနော့်အိုင်ဒီကဒ်ဖြစ်နေတာကိုး။ ဗီဇာသက်တမ်း တိုးပေးလိုက်တဲ့ အိုင်ဒီကဒ်ကလေးပါဘဲ။ ဗီဇာကို စာအုပ်မှာ မထုပေးတော့ဘဲနဲ့ သီးသန့် အိုင်ဒီကဒ်ကလေးဘဲ ထုတ်ပေးတယ်။ ၁၈ ရက်နေ့ကမှ ဗီဇာရုံးကိုသွားပြီး ဗီဇာလျောက်ထားတာ။ ဒီနေ့ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဗီဇာရပြီဆိုတော့ ၀မ်းသာလိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း။ ၂၀၁၀ ဧပြီလကုန်အထိ လန်ဒန်မှာ နေထိုင်ခွင့်ရသွားပြီ။
အထက်က ငှက်ဖျားဒဏ်အလူးအလဲခံရပြီး ပြန်နေထိုင်ကောင်းတဲ့အခါ အမိန့်ရှိတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့  စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့...
"တော်သေးတယ်..... ဒီ(တစ်နှစ်ဗီဇာ)တောင်ကိုတော့ ကျော်ခဲ့နိုင်ပြန်ပြီ" ဟူ၍သာ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 21:22 1 comment:
ဗီဇာတိုးဖို့အတွက် လှုပ်ရှားရင်းနှင့် နေရာအတော်များများကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ လီဗာပူးစထရိ(တ်)ဘူတာ၊ ဗစ်တိုးရီးယားဘူတာ၊ လန်ဒန်ဘရစ်ဂ်ျဘူတာ၊ အဲဒီဘူတာတွေက အရမ်းကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်တွေရှိတယ်။ တစ်ခြားဆိုင်အတော်တော်များများလဲ ရှိတယ်။ တကယ့်ကို သားနားတဲ့ ဘူတာကြီးတွေပါဘဲ။
မြေအောက်ရထား မြေပေါ်ရထား ၀င်ချိန် ထွက်ချိန်စာရင်းကို စခရင်း (ဖန်သားပြင်)နှင့်ပြထားတယ်။ စခရင်းပေါ်မှာ တွေ့မြင်ရတဲ့ ပလက်ဖောင်းနံပါတ်၊ သွားရမဲ့ခရီးတွေအတိုင်း အချိန်အတိအကျဘဲ။ မလွဲဘူး။
ဖျက်သိမ်းရင် ဖျက်သိမ်းတဲ့အကြောင်းကြေငြာတယ်။ နားမလည်ရင် ဘူတာဝန်ထမ်းတွေကို မေးလို့ရတယ်။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြေကြားပေးတယ်။
မြန်မာမှာ ကျနော် မီးရထားနဲ့ခရီးသွားတုန်းက ရထားအချိန်မသိလို့ သွားမေးတာကို ၀န်ထမ်းတွေ ပြေပြေလည်လည်မဖြေပေးကြဘူး။ ဘလက်ဘောမှာ ရေးထားတာ မမြင်ဘူးလား။ အဲဒီမှာ သွားကြည့် ဆိုပြီး ငေါက်လွတ်တာ ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ဘလက်ဘောကို သွားကြည့်တော့လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က ဖြေဖြူနဲ့ရေးထားတဲ့ ရထားခန့်မှန်းချိန်တွေကိုဘဲ တွေ့ရတယ်။ Update မလုပ်ထားဘူး။ ဟဲ ဟဲ Update ဆိုလို့ အထင်မကြီးလိုက်နဲ့ဦး။ ဘောဖျက်နှင့်ဖျက်ပြီး မြေဖြူနှင့်ရထားထွက်ချိန်စာရင်းကို မရေးထားရသေးတာကိုပြောတာ။ (မြန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်းတွေကို သတိရလို့ ညှပ်ထည့်လိုက်တာပါ)။
ဓါတ်ပုံဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ ဘူတာရုံတွေထဲမှာ တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်ကြရုံပေါ့ဗျာ။
တကယ်လဲ ဓါတ်ပုံရိုက်စရာကောင်းပါတယ် (ကျနော့်အမြင်အရပြောတာ)။ ကျနော်ကလဲ ရှုခင်းတို့ မြင်ကွင်းခပ်ဆန်းဆန်းတို့ဆို ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ ၀ါသနာပါလေတော့ အကြိုက်တွေ့သွားတာပေါ့ဗျာ။
နီကွန်ကင်မရာ ခပ်ပါးပါးလေးကို အိပ်ထဲက ထုတ်လိုက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ နေရာကို ရွေးလိုက်တယ်။
ဟော...တွေ့ပြီ။ ရထားအချိန်စာရင်းတွေပြထားတဲ့ ဖန်သားပြင်စခရင်ပြားကြီးတွေရှိတဲ့ဘက်ကို အရင်ဦးဆုံးရိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ။
ကင်မရာကိုလဲ ချိန်လိုက်ရော မြင်ကွင်းက မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ အပြင်ဘက်မှာရှင်းသလောက် ကင်မရာထဲမှာ မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်။ ခါတိုင်းရိုက်နေကျဆိုရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘဲ။ ဒီနေ့ ဘာဖြစ်နေလဲ မသိဘူး။ ကင်မရာမကောင်းလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော့်လိုင်စင်ဓါတ်ပုံတွေအားလုံးကို ဒီကင်မရာနှင့်ရိုက်ပြီး Photoshop နှင့်ဖြတ်တောက် ကူးထားတာ ရှယ်ချည်းဘဲ။ ဘာများမှားနေပါလိမ့်။
ကင်မရာကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့မှ ကင်မရာ lens ပေါ်မှာ အကွက်ကလေးတစ်ကွက်တွေ့လိုက်တယ်။ အလည်တည့်တည့်ကို ကွက်နေတာ။ ဒုက္ခဘဲ။ ဘာကွက်ကြီးပါလိမ့်။ အပြန်ပြန်အလှန်လှန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှ မူရင်း ဇစ်မြစ်က ပေါ်လာတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က ကင်မရာဘေးက ဘောင်အဆက်ကလေး နဲနဲကွာချင်သလိုလိုဖြစ်လာလို့
ဆင်ကော်နှင့်ကပ်ဖြစ်တယ်။ ဆင်ကော်က မြန်မာမှာရှိတဲ့ ဆင်ကော်လို ခဲပြစ်ပြစ်မဟုတ်ဘဲ အဖျော်ရည်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ ခြောက်သွားမှ ကပ်တယ်။ ကင်မရာဘောင်ကို ပိုပြီး မြဲအောင်လို့ ကော်ရည်များများညှစ်ထုတ်ပြီး ကင်မရာဘောင်သားလေးကို လိမ်းကျံလိုက်တယ်။ အဲဒီကတစ်ဆင့် ကင်မရာထဲ ၀င်သွားပြီး ကင်မရာ lens ပေါ်ပါ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားဟန်တူပါရဲ့ ။ ကင်မရာ lens ပေါ်မှာ အကွက်ကြီး ထင်နေတယ်။
ကျနော် တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားရှင်းလင်းပေမဲ့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
မိတ်ဆွေများ အဲဒီဆင်ကော်ကို ခြေဖျက်တဲ့ ဆေးတစ်မျိုးရှိရင် ကျနော့်ကို အကြံပေးကြပါဦးလို့ ဒီပို့စ်ကလေးကဘဲ အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မှန်ဘီလူးချိန်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေမပြေလဲ သိချင်ပါတယ်။ ကင်မရာဘောင်ကို ဆင်ကော်နှင့်ကပ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ ပြန်ခွါလို့ ရ မရလဲ ကျနော်သိချင်ပါတယ်ခင်များ။
မိတ်ဆွေတို့ တတ်တဲ့ပညာနဲ့ ကျနော့်ကိုကူညီပေးကြပါဦးလို့ မျက်နှာပူပူနဲ့ဘဲ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စုံထောက်ကျော်ကြီး ဦစံရှားရဲ့  မှားတဲ့အခါလဲ မှားပေမပေါ့ စကားလုံးကိုယူပြီး
မုဆိုးကျော်တွတ်ပီရဲ့  ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါလားလို့ တစ်တွတ်တွတ် ညီးညူရွတ်ဆိုနေရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဟဲ ဟဲ ကျနော်ကတော့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့  ကျေးဇူးတရားကြောင့် ကံကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေလျက်ပါဘဲ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:43 1 comment:
ဒီရက်အတောအတွင်း ဗီဇာကိစ္စနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ပို့စ်ကလေးတွေဘက်တောင် ကောင်းကောင်းလှည့်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ ဗီဇာဆိုတာ ပြောရတာလွယ်ကူသလောက် ဗီဇာတစ်ခုသက်တမ်းတိုးဖို့ အတော်လေးစိတ်မော လူမောဖြစ်ရပါတယ်။ Recommendation letter တွေ ယူရတယ်။ ကျောင်း Attendance တွေ ယူရတယ်။ Sponsor letter တွေယူရတယ်။ ကျန်တဲ့ Data အချက်အလက်တွေ အများကြီး စုဆောင်းထားရတယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ နေရတာလဲ မလွယ်ပါလား။
ကျောင်းတက်ခစရိတ်တွေအပြင် ဗီဇာစရိတ်က ပေါင် ၅၀၀ ဆိုတော့ လန်ဒန်မှာ နေထိုင်ခွင့်လေးရအောင် ငွေတွေ အများကြီး ပုံပေးရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေစဉ်တုန်းက နေထိုင်စရိတ်တွေကို ဒီလောက် သတိမထားမိပေခဲ့မဲ့ လန်ဒန်မှာနေတော့မှဘဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့  ရပ်တည်မှုဟာ မလွယ်ကူပါလားလို့ တွေးတောမိတယ်။
ပြည်ပကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့  နေထိုင်မှုက ပိုပြီးဆိုးဝါးတယ်။ ကျောင်းစရိတ်ကို ပြည်တွင်းကျောင်းသားတွေထက် အများကြီးပိုပေးရတယ်။ နေထိုင်စရိတ်တို့ ဘီလ်တို့ စားသောက်သွားလာတာတို့ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် မာစတာကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် တစ်နှစ်ကို ပေါင် တစ်သောင်းခွဲလောက်တော့ အသာလေးဘဲ။ ပညာကို ငွေပေးဝယ်နေရသလိုဖြစ်နေပြီ။ ငွေမရှိရင် ပညာရှိဖြစ်နိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအတော်လေးနည်းသွားပြီ။
မနေ့က တစ်နေ့လုံး ဗီဇာကိစ္စနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။ မနက်ပိုင်းကထဲက နေအိမ်ကထွက်လာတာ၊ အရေးထဲ စီးနေတဲ့ရထားက စီးနေရင်းတန်းလန်းနှင့် ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်တယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီး နောက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုက ပြန်သွားရတယ်။ ချိန်းထားတဲ့အချိန်က နေ့လည် ၂ နာရီ ခွဲ။ ရထားတွေရဲ့  ကြန့်ကြာမှုကြောင့် ဗီဇာရုံးကို သုံးနာရီမှတ်တင်းမှ ရောက်သွားတယ်။ ဒါတောင် ရထားဘူတာက ဆင်းပြီး အငှားကားခေါ်သွားလို့။ ဘူတာကနေ လမ်းလျောက်ရင် ၁၀ မိနစ်ကျော်ကျော် ကြာဦးမယ်။
ကျနော်တို့ နေတဲ့နေရာနှင့်ဆို နှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်သွားရတယ်။ မနေ့က ရထားအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် အသွားသက်သက် သုံးနာရီကျော် ကြာသွားတယ်။ မြို့ ထဲမှာ ရထားမမီမှာစိုးလို့ ဘူတာထဲ ဟိုပြေးဒီပြေး မာရသွန်လုပ်ခဲ့တာကို ပြန်တွေးကြည့်ရင်း ပြုံးနေမိတယ်။ ကြည့်မကောင်းအောင်ကို ပြေးနေရတာ။
ကျနော်တို့ဗီဇာတိုးဖို့လူက နှစ်ယောက်၊ အဖော်လိုက်ပေးတဲ့ အကိုက တစ်ယောက်ဆိုတော့ သုံးယောက်ပေါ့ဗျာ။ လူတွေကြားထဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်သလိုကို ပြေးခဲ့ရတာ။ အဖော်အကိုက မြန်မာဆိုပေမဲ့ လန်ဒန်သားဖြစ်နေပါပြီ။ သူလိုက်ကူညီပေးလို့သာ ခရီးအဆုံးထိအဆင်ပြေပြေရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ ကျနော်တို့ချည်းဆို လမ်းကြောတောင် ကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။ ရထားတွေ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် အသွားသက်သက်တောင် ဘတ်စ်ကားတစ်ခါ မြေအောက်ရထား ငါးခါ မြေပေါ်ရထား နှစ်ခါ အငှားကားတစ်ခါ စီးခဲ့ရပါတယ်။
ဗီဇာရုံးကိုရောက်တော့လဲ ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို စကင်န်ဖတ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ဓါတ်ပုံကညှိဖြတ်ဖို့ ယူသွားတဲ့ ကပ်ကြေးလေးတောင် သူတို့ ခဏသိမ်းထားလိုက်သေးတယ် (ပြန်လာတဲ့အခါမှ ရွေးယူခဲ့ရတယ်)။ ချွန်ထက်တဲ့ပစ္စည်း ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အထဲအယူမခံပါဘူး။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေအားလုံးကိုလဲ ပိတ်ထားရပါတယ်။
ဗီဇာရုံးကို ရောက်ရောက်ချင်း တုံကင်ယူရတယ်။ နံပါတ်အတိုင်းခေါ်တွေ့တယ်။ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့ ကောင်တာထိအောင် အဆင့်ငါးဆင့်ကျော်ဖြတ်ရတယ်။ အဲဒီငါးဆင့်လုံးမှာ အစစ်ဆေးခံရတယ်။
အဆင့် ၁ ကောင်တာ။
ဒီကောင်တာမှာ ပါလာတဲ့ အချက်အလက်တွေ အားလုံးကို စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်မှ ဒုတိယကောင်တာကို သွားရတယ်။
အဆင့် ၂ ကောင်တာ။
ဒီကောင်တာမှာ အချက်အလက်တွေ ထပ်စစ်ဆေးပြီး ပေါင် ၅၀၀ ပေးရတယ်။
အဆင့် ၃ ကောင်တာ။
ဒီကောင်တာမှာ ပတ်စ်ပို့ကို သေချာစစ်ဆေးပြီး အချက်အချက်တွေကို ကွန်ပျူတာနှင့်သိမ်းဆည်းတယ်။
အဆင့် ၄ ကောင်တာ။
ဒီကောင်တာမှာ လက်ချောင်းအားလုံးရဲ့  ဗွေရာကိုတွေ စကင်န်ဖတ်ယူတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်။
အဆင့် ၅ ကောင်တာ။
ဒီကောင်တာမှာ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တယ်။ သမိုင်းကြောင်းတွေနောက် လိုက်တယ်။ စစ်ဆေးမေးမြန်းတယ်။
(အင်္ဂလန်မှာနေတာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာပေမဲ့ သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုတော့ အဖော်ပါလာတဲ့အကိုတစ်ယောက် အကူအညီနဲ့ဘဲ ဖြေရှင်းလိုက်ရတယ်။
တစ်ချို့ စကားတွေ နားမလည်နိုင်ဘူး။)
အားလုံး မှန်ကန်အဆင်ပြေပြီဆိုမှ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။
(ကောင်တာတွေကတော့ အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်နံပါတ်ခေါ်တဲ့ ကောင်တာကို သွားရုံပါဘဲ)
အခု နည်းစနစ်က ပတ်စ်ပို့စာအုပ်ပေါ်မှာ ဗီဇာမထုပေးတော့ပါဘူး။ အိုင်ဒီကဒ်ဘဲ ကိုင်ရမယ်တဲ့။ အဲဒီအိုင်ဒီကို စာတိုက်က တစ်ဆင့်ပို့မယ်လို့ ပြောတယ်။ ငါးရက်အတွင်းအရောက်ပို့ပေးမယ်၊ မရောက်ရှိရင် ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားဖို့ မှာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်ဗီဇာ ထပ်ရမှာ သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။
ဗီဇာရုံးဝန်ထမ်းတွေ သဘောကောင်းလို့ရယ်၊ အဖော်သူငယ်ချင်းရဲ့  ကူညီမှုကြောင့်ရယ် ကျနော်ကတော့ လန်ဒန်မှာနေဖို့ နောက်ထပ်တစ်နှစ် ဗီဇာ ရသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဗီဇာမလျောက်ခင် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ဗီဇာအဆင်ပြေဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးလို့ တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့
တစ်ယောက်မှ ဆုမတောင်းပေးကြပါဘူး။ ရူးပေါပေါကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ ဗီဇာမရပါစေနဲ့လို့တောင် ဆုတောင်းပေးလိုက်သေးတယ်။ တော်တော်အားကိုးရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဘဲ။
ဆုတောင်းပေးသည်ဖြစ်စေ မပေးသည်ဖြစ်စေ ခင်မင်တဲ့သူအားလုံးကို ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့ မှတ်တမ်းတင် ကဗျည်းရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:34 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:462comments:
ရန်ကုန်မြို့ တော်ကြီးမှာ သမားတော်ကြီး တစ်ဦးရှိခဲ့တယ်။ ဂရင်ဂျီနာနှင့်ပတ်သက်ရင် အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ သမားတော်ကြီးပေါ့။ သူ့ရဲ့  နာမည်ဂုဏ်သတင်းကြောင့် အနယ်အနယ်အရပ်ရပ်က ဂရင်ဂျီနာလူနာတွေ ၀င်လာမစဲတစ်သဲသဲဘဲ။
သူ့မှာ တစ်ဦးတည်းသော သားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ သူ့သား ဆယ်တန်းအောင်မြင်တဲ့နှစ်ထဲမှာဘဲ ဂရင်ဂျီ လူနာတစ်ဦးရောက်လာတယ်။ အဲဒီ ဂရင်ဂျီလူနာကို သားဖြစ်တဲ့သူက ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူ့ရဲ့  ဂရင်ဂျီနာကို မကြာမကြာလာပြတဲ့အချိန်တိုင်း သူတွေ့မြင်နေကျဖြစ်နေလို့။
သမားတော်ကြီးရဲ့  သားဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဆေးဒေါက်တာဘွဲ့ ယူဖို့ အင်္ဂလန်ကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူရင်းနှင့်လန်ဒန်မှာ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက် အချိန်ယူရတယ်။ ပြီးမှ ဒေါက်တာလိုင်းဘက် ကူးပြီး ဆေးပညာသင်ယူတယ်။ တိုတိုပြောရရင် သူ အင်္ဂလန်မှာ ဆေးဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိသွားခဲ့တယ်။
သူဆေးဒေါက်တာဘွဲ့ကြီးကို ယူပြီး အမိမြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်က အိမ်ကို ရောက်ရောက်ချင်း လူနာတစ်ဦးကို မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ သူအင်္ဂလန်မလာခင်ကထဲက ကုသမှုခံယူနေတဲ့ ဂရင်ဂျီလူနာပါ။ သူ အခုထက်ထိ ဂရင်ဂျီရောဂါမပျောက်သေးဘူး။ သူစဉ်းစားနေမိတယ်။
"အဖေကနာမည်ကြီး သမားတော်တစ်ယောက်ဘဲ။ ဒီရောဂါအတွက် ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင်ကြာအောင် ကုသနေရတာလဲ"
သူ့အဖေဆီ ခွင့်တောင်းပြီး အဲဒီလူနာကို သူတာဝန်ယူလိုက်တယ်။ ဂရင်ဂျီနာကို ခွဲစိပ်ကုသတယ်။ စားဆေး လိမ်းဆေး ပေးတယ်။ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကို ပြောပြတယ်။ မကြာလိုက်ပါဘူး။ အဲဒီ ဂရင်ဂျီနာဟာ နှစ်လအတွင်းမှာ လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားတယ်။ လူနာလဲ ၀မ်းသာ သူလဲ ရွှင်ပြုံးလို့ပေါ့။
အဲဒီ အင်္ဂလန်ပြန်ဒေါက်တာလေးက သူ့အဖေကို မေးလိုက်တယ်။
"အဖေ... ဒီဂရင်ဂျီနာလူနာကို ကျနော် အင်္ဂလန်မသွားခင်ကထဲက အဖေ ကုသနေတာ။ ကျနော် မှတ်မိသလောက်ဆို ၁၀ နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။ အဖေက နာမည်ကြီး သမားတော်ဘဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီရောဂါလေးတောင် ပျောက်အောင် မကုသနိုင်ရတာလဲ။ ကျနော် ကုသလိုက်တော့ အဖေ မြင်တဲ့အတိုင်းဘဲ။ နှစ်လအတွင်း ရောဂါအားလုံး အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းသွားပြီ"
အဖေရဲ့  ပြန်ပြောပြတဲ့ စကားကြောင့် သားဒေါက်တာတစ်ယောက် မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူး ဖြစ်သွားပြီး ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားရှာတယ်။ အဖေက ဘာပြောလိုက်သလဲ ဆိုတော့....
"ငါ့သားရေ... စကား သိပ်မများနဲ့ကွာ။ မင်းအင်္ဂလန်က ရလာတဲ့ ဆေးဒေါက်တာဘွဲ့  ပူပူနွေးနွေးလေးဟာ အဲဒီ ဂရင်ဂျီနာ ရောဂါသည်ကြောင့် ရလာတာကွ" တဲ့။
(စဉ်းစား တွေးတော သင်ခန်းစာယူဖို့ရယ်ပါ။)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:532comments:
Valentine's Day ဟာ
အချစ်ရဲ့  သင်္ကေတဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခု
Road Map တွေ ထပ်ဆွဲပြီး
တစ်ကိုယ်ကောင်လုံး သွေးတွေ လည်ပတ်နေတယ်
ကိုယ့်ရဲ့  ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်နေရာကိုဘဲထိထိ
ကျန်တာ မတမိဘဲ မင်းလေးကို တနေမိတယ်။
ချစ်သူတွေ အများကြီး မလိုချင်ပါဘူး
သံယောဇဉ်ကြိုးတွေ အများကြီး မညှိတွယ်ချင်ပါဘူး
အချစ်စစ်နဲ့ မင်းလေးကို ချစ်နေတာပါ။
ရင်ထဲမှာ မင်းလေးဘဲ နေရာယူထားတယ်။
ကိုယ့်နှလုံးသားလေးက မင်းလေးအတွက် သက်သက်ဘဲ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:22 No comments:
မနက်ဖန်ဆိုရင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်။
အခါကြီးရက်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လဲ လူတွေစည်ကားနေကြမှာ အမှန်ဘဲ။ အပန်းဖြေစခန်းတွေမှာ၊ ကမ်းခြေတွေမှာ၊ ဥယျာဉ်ပန်းခြံတွေမှာ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ၊ ယုတ်စွအဆုံး ဆိုက်ပါနက်တွေမှာ လူတွေပြည့်နက် ဆူညံနေကြမှာ သေချာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ လူငယ် လူရွယ် ယောက်ျားလေး မိန်းခလေးတွေပေါ့။
လူကြီးတွေကတော့ ဘယ်လိုနေကြမယ်မသိပါဘူး။ လူငယ်တွေလိုဘဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ကို တန်ဖိုးထားကြဆဲဘဲလား။
ဘာဖြစ်လို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ လူတွေ သက်ဆိုင်ရာနေရာတွေမှာ စည်ကားနေကြမှာပါလိမ့်။
ဒါက လူတိုင်းသိပါတယ်။ (အဟဲ ကျနော်လဲ သိနေတယ်)။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့က ချစ်သူများနေ့လေ။
Valentine's Day လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေ သိနေကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ချစ်သူမဖြစ်သေးတဲ့သူတွေ ချစ်သူအဖြစ်ရောက်ကြမယ်။ ချစ်သူဖြစ်ပြီးသူတွေ မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်။ ပန်းလက်ဆောင်ပေးကြတယ်။ ကဒ်လက်ဆောင်ပေးကြမယ်။ ချောကလက်လက်ဆောင်ပေးကြမယ်။ ကဗျာလက်ဆောင်ပေးကြမယ်။
အဲဒီ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော့်ကို မေးလေ့ရှိတယ်။ ချောကလက် ဘယ်နှစ်ခု လက်ခံရရှိပြီးပြီလဲတဲ့။ မိန်းခလေးတစ်ယောက်က ချောကလက် လက်ဆောင်ပေးတာကို ခံရရင် ချစ်တယ်လို့ ပြောတာနဲ့အတူတူဘဲတဲ့လေ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျနော် တစ်ခါမှ အဲဒီချစ်သူများနေ့မှာ ချောကလက် လက်ဆောင် မရရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့ ကျနော့်ဆီမှာ ချောကလက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဟဲ ဟဲ အထင်တော့ မကြီးလိုက်ကြနဲ့ဦး။ ဘယ်သူကမှ လက်ဆောင်ပေးထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ကြိုက်လွန်းလို့ တစ်ပေါင်ဆိုင်သွားပြီး အများကြီးဝယ်ထားတာ။
Valentine's Day ဆိုပြီး ပါးစပ်က တစ်သွင်သွင်ပြောနေကြပေမဲ့လဲ Valentine' Day ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့  မူရင်းဇစ်မြစ်ကတော့ အယူအဆတွေရဲ့  ၀ါးမျိုမှုအောက်မှာ ဝေေ၀၀ါးဝါးရယ်ပါ။
ဘယ်ဟာကို အမှန်ယူရမှန်းမသိပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ဒီပုံပြင်လေးကိုတော့ လူတိုင်းနီးပါး လက်ခံထားကြလေရဲ့ ။
Valentine ဆိုတာ St. Valentine ဆိုတဲ့ ရောမလူမျိုးတစ်ဦးရဲ့ နာမည်ကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။
သူ့ယုံကြည်တဲ့ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒကို စွန့်လွတ်ခိုင်းတာကို ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အေဒီ ၂၆၉ ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ နေ့မှာ သူသေဆုံးခဲ့တာပါ။ ခရစ်ယာန်အတွက်တော့ အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးဆိုရင် မမှားပါဘူး။ သူသေဆုံးတဲ့နေ့မှာဘဲ လူတွေအားလုံးရဲ့  ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒဏ္ဍာရီအရကတော့ သူမသေခင် ထောင်မှူးသမီးနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးအတွက် နှုတ်ဆက်စာတစ်စောင်ရေးထားခဲ့ပြီး စာရဲ့  အဆုံးမှာ From Your Valentine ဆိုတဲ့စာနဲ့အတူ လက်မှတ်ပါထိုးထားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
စိန့်ဘာလင်တိုင်းဟာ ဘုရားကျောင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။
ကလောက်ဒီယပ် အင်ပါယာခေတ် (Emperor Claudius) အခါက အာဏာကို ဖီဆန်မှုနဲ့ ကလောက်ဒီယပ်ဧကရာဇ်ကြီးကိုယ်တိုင် သူ့ကို ထောင်ချ အကျဉ်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။
အေဒီ ၄၉၆ ခုရောက်တဲ့အခါမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂီလက်စီယပ် (Gelasius)က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ကို စိန့်ဘာလင်တိုင်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဖြေးဖြေး ဖြေးဖြေးနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ကို ချစ်သူအချင်းချင်း ချစ်စကားသ၀ဏ်လွှာလေးတွေ ဖလှယ်ကြတဲ့ နေ့ (ချစ်သူများနေ့) အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ စိန့်ဘာလင်တိုင်းကြီးကတော့ ချစ်သူများရဲ့  သူတော်ကောင်း အကြီးအကဲအဖြစ်နဲ့ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ချစ်သူများနေ့ကို ကဗျာလေးတွေ ပေးပို့ခြင်း လက်ဆောင်လေးတွေပေးခြင်းစတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေနဲ့ အမှတ်အသားပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး Valentine Card ကို ပေးပို့ခဲ့တဲ့သူကတော့ အမေရိကနိုင်ငံက Miss Esther Howland ဖြစ်ပါသတဲ့ခင်များ။
အပြည့်အစုံဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီလင့်ခ်http://www.pictureframes.co.uk/pages/saint_valentine.htm လေးထဲ ၀င်ရောက်ပြီးသာ မွှေနှောက်ကြပေတော့လို့။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က မြန်မာ့ပြည်ထောင်စုနေ့၊ ၁၃ ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့၊ ၁၄ ရက်နေ့က ချစ်သူများနေ့ဆိုတော့ သုံးရက်ဆက်တိုက် နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေပေါ့ဗျာ။
ချစ်သူမရှိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအားလုံး ၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုပွဲတက်ရောက်ရင်း နှစ်သက်တဲ့သူနှင့်တွေ့၊ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ချစ်ရေးဆိုပြီး ၁၄ ရက်နေ့မှာ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဖြေကို မဆိုင်းမတွရရှိနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပန်ထွာပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
http://www.pictureframes.co.uk/pages/saint_valentine.htm ကို မှီငြမ်းထားပါတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:182comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:523comments:
နွားကွဲရင် ကျားဆွဲလိမ့်မယ် တဲ့
ဒီစကားကို ဗိုလ်ချုပ် အသေမှတ်ထားခဲ့ဟန်တူရဲ့ 
ဒီစကားလဲ တကယ့်ကို မှတ်သားစရာကောင်းတယ်
ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မှုစရာမလို
ဟို ဝေးဝေး အတိတ်က ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့  စိတ်ဓါတ်
အနာခံမှ အသာစံ တဲ့
အနာမခံဘဲ အသာစံတဲ့လူတွေ ဒီကမ္ဘာမှာမရှိသလောက်ပါဘဲ
ပြည်သူအများ အသာလေးစံပြီးရင်း စံရအောင်
ဒီနေ့မှာ ၆၂ နှစ်လုံးလုံးပြည့်ခဲ့ပြီ
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:57 No comments:
တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယသမားဆိုတော့လဲ ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေလုပ်စရာမရှိဘူး။ လုပ်စရာမရှိတိုင်း စာကြည့် စာဖတ်ဖြစ်တယ်။ စာအုပ်တွေဖတ်ရတာ ငြီးငွေ့လာပြီဆိုရင် ဟိုစဉ်းစား ဒီစဉ်းစားနဲ့ ဆိုက်ကိုတွေ ၀င်ဝင်လာတယ်။
လန်ဒန်မှာ နေတာကြာလာရင် ဦးဏှောက်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်မသိဘူး။ ယူနီမြန်မြန်တက်မှ ဖြစ်တော့မယ်။
နို့မဟုတ်ရင် ရူးကြောင်ကြောင်များဖြစ်သွားမလား မပြောတတ်တော့ဘူး။
နဲနဲညောင်းလာလို့ လမ်းထွက်လျောက်ရင်း ကျနော်တစ်ခုစဉ်းစားမိလိုက်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့  သာသနာတော်ဟာ အနှစ်ငါးထောင်ကျော်လာရင် အလိုလို ကွယ်ပျောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးထားတယ်လေ။ အဲဒီလို သာသနာကွယ်တဲ့ အခါမှာလဲ ဘုရားရှင်ရဲ့  ဓါတ်တော်မွေတော်တွေ အားလုံးတစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းပြီး ရုပ်အသွင်ကိုဆောင်ကာ တရားဟောလိမ့်မယ်။ တရားဟောပြီးနောက်မှ ဓါတ်တော်တွေ အားလုံးလောင်ကျွမ်းပြီး သာသနာလုံးဝကွယ်ပျောက်မယ်တဲ့။
ဒီခေတ်သိပ္ပံပညာရဲ့ တိုးတက်မှုအခြေအနေအရ ပျံ့ လွင့်နေတဲ့ လေထုထဲက အသံ၊ လေထုထဲက ရုပ်ဝတ္ထုတွေကို စုစည်းဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အတော်များများရှိနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ (များစွာ)က ပြောဆိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်တို့ အသံတို့ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ စူးစမ်းရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။
ခရစ်နှစ် ၂၀၀၀ နှင့် ၃၀၀၀ကြားထဲမှာ အတိတ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်တို့ အသံတို့ကို ကောင်းစွာ စုစည်းပြီး ထင်ထင်ရှားရှားပြသနိုင်လောက်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတောင် အင်တာနက်တို့ ရေဒီယိုတို့ တယ်လီဗီးရှင်းတို့ ဂြိုဟ်တုတို့ အဆင်သင့်ရှိနေကြပြီမဟုတ်ပါလား။ ပြီးတော့ လကမ္ဘာပေါ်တို့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တို့ လူသားများ ရောက်ရှိနိုင်ကြပြီလေ။
ဘုရားရှင်ရဲ့  ရုပ်တော် အသံတော်တို့ကိုလဲ သိပ္ပံပညာနဲ့ ဖမ်းမိကောင်းဖမ်းမိနိုင်တယ်။ တရားဟောနေတဲ့ပုံစံ သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံစံတို့ကိုလဲ ဖမ်းမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သာသနာကွယ်ခါနီး ဓါတ်တော်မွေတော်များ စုစည်းပြီး ဘုရားရှင်အသွင်ဆောင်တယ်ဆိုတာ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့  ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ဘုရားရှင်က ကြိုတင်သိထားလို့ ဒီလိုဘဲ ဟောထားခဲ့ဟန်တူတယ်လို့ ကျနော် စဉ်းစားမိတယ်။
အဲဒီ ဘုရားရှင်ရဲ့  အသံတော် ရုပ်တော်တို့ကို သိပ္ပံပညာနဲ့ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီး လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်လိုက်ခြင်းကိုပင် သာသနာကွယ်တယ်လို့ ခေါ်လေသလား မသိတော့။
ဒီကမ္ဘာကြီးအတွင်းမှာ အံ့သြစရာတွေ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ရှိနေတာကို ဘယ်လိုမှ ငြင်းဆန်လို့မရပါ။
ကျနော့်ရဲ့  အထင်ဟာ အထင်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ တတ်အပ် ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။
အထင်ဟာ အထင်သက်သက်လဲ ဖြစ်နိုင်တာပါဘဲလေ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 10:35 1 comment:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:27 No comments:
တန်ဆေး လွန်ဘေးလို့ ဆိုရိုးစကားရှိတယ်လေ။
ပြီးတော့ ဆေးကို မူးယစ်ဆေးအနေနဲ့လဲ မသုံးသင့်ပါဘူး။
အမှန်တကယ်ဆိုရင် ဆေးဆိုတာ အဆိပ်ပေါင်းစုံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစိုင်အခဲလေးတစ်ခုရယ်ပါ။
ဒါကြောင့် အချိုးကျဘဲ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
တစ်ရက်ကို တစ်လုံးသောက်ရမဲ့ဆေးကို ဒေါက်တာက တစ်လစာ ပေးခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့။ တစ်ရက်ကို တစ်လုံးဘဲ သောက်ပါလို့ ဒေါက်တာကမှာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနာက ရက်သုံးဆယ်တိတိ တစ်ရက်ကို တစ်လုံးသောက်ရမှာ ပျင်းလို့ တစ်ရက်ထဲနဲ့  အလုံးသုံးဆယ်လုံး တစ်ကြိမ်ထဲ သောက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီလူနာ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
သွားပြီပေါ့။ သေရွာကို သွားမှာကို ပြောတာ။ မသေရင်တောင် အနည်းဆုံး ဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ်ရောက်သွားမှာ သေချာတယ်။
ကျနော်တို့မြို့ မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တွေ့ဖူးတယ်။ သူ့အမျိုးသားနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေလို့ ဘာမီတွန် (ဘီပီအိုင်ထုတ်)ကို အလုံး များစွာ တစ်ခါထဲ သောက်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ရာထဲမှာ လဲတော့တာပါဘဲ။ သူ့ယောက်ျားသိသွားတဲ့အခါမှာ အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ဘယ်နှစ်လုံးကြီးတောင် သောက်လိုက်တာလဲလို့ မေးတယ်။ သူက အလုံးသုံးဆယ်တိတိသောက်လိုက်တယ်လို့ ဖြေတယ်။
အဲဒီဘာမီတွန်ဆေးတွေကို အန်ထုတ်ဖို့ ဆေးရုံချက်ချင်းတင်တယ်။ ဆားရည်တွေ ၀မ်းထဲကို သွင်းတယ်။ ဘာမီတွန်ဆေးတွေ အန်ထွက်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အန်ထုတ်လာတဲ့ ဆေးဟာ အလုံးသုံးဆယ်ပမာဏမရှိသေးဘူး။
ဒါကြောင့် ဆားရည်တွေကို ထပ်သွင်းတယ်။
"တော်ကြပါတော့၊ ကျွန်မ သောက်လိုက်တဲ့ ဘာမီတွန်က ငါးလုံးထဲပါ"
အမျိုးသမီးက ဆားရည်ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့လို့ ရှင်းပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူက မယုံကြည်ဘူး။ အလုံးသုံးဆယ်တိတိသောက်ထားတယ်ဘဲ ထင်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဆားရည်တွေကို ၀မ်းခေါင်းထဲ အတင်း သွင်းစေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီ ဆားရည်သွင်းတဲ့ ဒဏ်ကြောင့်ဘဲ အမျိုးသမီးဟာ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်။
အမှန်တကယ် အမျိုးသမီး သောက်ထားတဲ့ ဘာမီတွန်လဲ ငါးလုံးထဲပါ။ ယောက်ျားကို ရွဲ့ ချင်လို့ လိမ်ညာလိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ခမျာ မသေသင့်ဘဲ သေဆုံးသွားရရှာတယ်။ သူ့ယောက်ျားကတော့ အခု အချိန်မှာနောက်မိန်းမနှင့်ပျော်လို့မော်လို့။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော် အသက်ငယ်လွန်းနေသေးတဲ့အတွက် အတိအကျတော့ သူတို့ဖြစ်ပျက်ပုံကို မသိလိုက်ရပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက ပြောစကားအရကတော့ ကျနော် အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါဘဲ။
စာရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ကြေကွဲဆို့နင့်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ ၀ါသနာအဆင့်ဘဲ ရှိသေးတာမို့ ဇာတ်ကွက်ပေါ်ရုံလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါ။
အဓိကကတော့ ဆေးကို ဆေးအဖြစ်နဲ့ဘဲ သောက်သုံးဖို့ ပြောပြချင်တာပါ။ အိမ်ထောင်ရေး ပညာပေး ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေး ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးသားရအောင်လဲ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က လူလွတ်ဆိုတော့ အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးစာချ၊ မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြ ဖြစ်နေမှာလဲ စိုးရိမ်ရသေးတယ်လေ။
ဆေးကို ဒေါက်တာညွန်ကြားချက်အတိုင်း (သို့) ဆေးအညွန်းအတိုင်းသာ သောက်သင့်ပါတယ်။
ဆေးညွန်းဆိုရာမှာလဲ မိတ်ဆွေတို့ ဥာဏ်ရှိသလို သံပုရာသီး ပျားရည် အရက် စသည်တို့နှင့်ရောစပ်၍သောက်သုံးနိုင်ပါသည် ဆိုတဲ့ ဆေးညွန်းမျိုးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတိအကျညွန်းထားတဲ့ ဆေးညွန်းကိုဘဲ ဆိုလိုတာပါ။
ဥစ္စာကံစောင့် အသက်ဥာဏ်စောင့် ၊ သတိတမံ ဥာဏ်မြေကတုတ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း
အားလုံးဆေးကို ဆေးအဖြစ်နဲ့ဘဲ သောက်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:37 No comments:
သူဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့စာရင်းတွေကို စာရင်းကိုင်လက်ထဲအပ်လိုက်ရင်တောင် စာရင်းကိုင် ထိုင်ငိုရလောက်တယ်။
အဲဒီလောက်ထိကို သောင်းကျန်းနေတာ။ အ၀တ်အစားတွေလဲ မနေရ၊ စားစရာတွေပါမကျန်
သူ့ရဲ့ အဖျက်လုပ်ငန်းကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် အကြွေစောခဲ့ကြရတယ်။
ဒီလို အဖျက်လုပ်ငန်းတွေ ရှိနေလို့လဲ ကမ္ဘာကြီးမငြိမ်းချမ်းတာပါ။ အနုမြူစစ်ပွဲဆိုလား၊ နျူကလီးယားစစ်ပွဲဆိုလား၊ ဓါတုလက်နက်စစ်ဆင်ရေးဆိုလား စုံနေတာပါဘဲ။ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေလေ။ ဘာသာတရားကို ထိပါးစော်ကားလာရင် ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆိုတာလဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သေးတယ်။ မြေပြင်စစ်ပွဲတွေရိုးအီသွားတဲ့အတွက် အာကာသစစ်ပွဲတို့၊ ကြယ်တာရာစစ်ပွဲတို့တောင် တစ်နေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လဲ ကမ္ဘာကြီးက မခံမရပ်နိုင်တော့လို့ ကမ္ဘာပျက်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာတာထင်တယ်။ အဲဒါ... သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေရဲ့  မေတ္တာတရားခေါင်းပါးမှုကြောင့်ပေါ့။
အဖျက်လုပ်ငန်းရှိနေလို့လဲ တော်လှန်ရေးတွေ ပေါ်ပေါက်နေရတာ။ တော်လှန်ရေးတွေ ရှိနေသရွေ့  အဖျက်လုပ်ငန်းတွေလဲ တိုးတိုးပြီး လုပ်လာကြဦးမှာဘဲ။ ကမ္ဘာကြီးမှာ နေထိုင်ရတာတောင် ကြောက်စရာဖြစ်လာပြီ။ ခေတ်မီတိုးတက်နေတဲ့ သိပ္ပံခေတ်ကြီးမှာ ခလုပ်တစ်ချက်လောက် နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံး အာကာသထဲ လွင့်ထွက်ကြွေမွပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးက တစ်စထက်တစ်စ ကျဉ်းမြောင်းလာပြီလေ။ ဆုတ်ကပ်ကြီးဖြစ်နေတော့လဲ ဒီလိုနဲ့ ကမ္ဘာကြီး (ထန်းလျက်ကို ခွေးလျက်သလို) လုံးပါးပါးတော့မယ်ထင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာကို အသာလေးထားလိုက်ဦး။ အခု ကျနော်တို့ အိမ်မှာတင် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖျက်လုပ်ငန်းလေးကို ကြည့်လိုက်ပါဦး (အမှတ် ၁ မှာ ဖော်ပြပြီး)။
ကျနော့်နေရာမှာ မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ????
၁။ သည်းခံပြီး ဒီအတိုင်းဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာလား။
၂။ တနည်းနည်းနဲ့ တုန့်ပြန်မှာလား။
ကျနော်ကတော့ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ သည်းခံလေ ပိုဆိုးလေဘဲ။ တော်ကြာ အဖျက်လုပ်ငန်းအပေါင်းပါတွေ တိုးပွါးလာရင် ကျနော်တို့ တုန့်ပြန်ဖို့ခက်နေမှာ။
ငါးပါးသီလထဲက ပါဏာတိပါတကံဆိုတာ မရှိဘူးဆိုရင် အဲဒီကောင်တော့ မလွယ်ဘူး။ ယမမင်းနဲ့တွေ့ဖို့ လက်မှတ်ပါတစ်ခါထဲရသွားမှာ သေချာတယ်။
အဖျက်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူကို ဘယ်သူလဲဆိုပြီး တစ်လွဲတွေးမနေကြနဲ့ဦးနော်။
သူက လူမဟုတ်ဘူး။ ကြွက်ဗျ။ လန်ဒန်ကြွက်။ ကြွက်ဆိုမှ တကယ့်ကြွက်။ မြန်မာနိုင်ငံက ကြောင်တွေတောင် ဒီကြွက်ကို မြင်ရင် ထွက်ပြေးမှာ သေချာတယ်။ မြန်မာကြောင်ထက်ကြီးနေလို့။ လန်ဒန်မှာက ဗြိတိသျှလူမျိုးတွေတင်မကဘဲ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးအကြီးစားတွေချည်းဘဲ။ သစ်သီး သစ်ဥ အစားအသောက်၊ ယုတ်စွအဆုံး လဘက်ရည်ခွက်ကစလို့ ပေါ့။ တကယ့်ထွားမှထွား။ ကျနော်တောင် Ielts စာမေးပွဲဖြေရင်း ကပုချီနို ကော်ဖီ မှာသောက်ဖူးသေးတယ်။ ခွက်ကြီးက ကြောက်စရာတောင်ကောင်းတယ်။ ကြီးမှကြီး။ ပိုက်ဆံနှမြောလို့သာ ကြိုးစားပြီး ကုန်အောင်သောက်ခဲ့ရတာ။
အခုကြွက်ကြီးကလဲ တကယ့်အကြီးစားကြွက်ကြီးပါ။ ညဘက်မှာ လူသံကြားလို့ ထွက်ပြေးရင်း အမှိုက်ကြီးကိုတိုက်မိလို့ အမှိုက်ပုံးကြီးတောင် လဲကျသွားရတဲ့အထိ ခပ်ထွားထွားကြွက်ကြီးဘဲ။
ကြွက်သေတစ်ခု အရင်းပြု ဆိုတဲ့ ဇာတ်တော်လာ စကားပုံအတိုင်း ဖြစ်လာနိုင်ရင်တော့ ကျနော် ပါဏာတိပါတကံအထိုက်ခံပြီး ချမ်းသာအောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဟဲ ဟဲ။ ကျနော့်ကို ရက်စက်တယ်လို့ မပြောလိုက်ပါနဲ့။ ပလိပ်ရောဂါကြောက်လို့ အားလုံးအတွက် အမိုက်ခံမဲ့သဘောပါ။
အခုထက်ထိတော့ ကျနော်လဲ အကောင်အထည် မဖော်ဖြစ်သေးဘူး။ ကြွက်ကလဲ သောင်းကျန်းနေဆဲပါဘဲ။
ကျနော် အဖြေတစ်ခုတော့ လိုချင်တယ်ဗျာ။ မိတ်ဆွေတို့ ကျနော့်ကို ကူညီပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးကြပါဦး။ ကျနော် ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ကလေးဘ၀တုန်းကလို ထုံးစံအတိုင်း လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား။
ဒါမှမဟုတ်... မေတ္တာတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ဒီအတိုင်းဘဲ ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးလိုက်ရမလား။
ကျနော် ခေါင်းရှုပ်လာပြီဗျာ။ ဒီမှာဘဲ ရပ်လိုက်တော့မယ်။
ကျနော့်အမျက် အပြင်များထွက်သွားသလားမသိဘူး။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 16:58 No comments:
သက်ရှိလောကကြီးရှိနေတာကိုက သိပ်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေတာကလား။ သက်မဲ့လောကထဲမှာ သက်မဲ့ အရာဝတ္ထုလေးတစ်ခုဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ။ ဒါဆို စိတ်ပူပန်စရာလဲ မလိုဘူး။ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေစရာလဲ မလိုတော့ဘူး။
အတတ်နိုင်ဆုံး ချုပ်တည်းထားပေမဲ့လဲ တစ်ခါတစ်လေကျပြန်တော့ ချုပ်တည်းလို့ မရအောင် ဖြစ်ရတယ်။
ကိုယ်တိုင်က သက်ရှိလောကထဲက သက်ရှိလူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြန်တော့လဲ သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေရဲ့  ထုံးစံအတိုင်း လောဘ ဒေါသ မာန်မာနတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတာပေါ့လေ။ ဒါ သဘာဝ ကျပါတယ်။
ကျနော်က အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေး အမြဲလုပ်တယ်။ သူက မလုပ်တဲ့အပြင် အမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေတယ်။ အမှိုက်တွေ ဖွတယ်။ အသုံးအဆောင်တွေကို ရိုက်ချိူးဖျက်ဆီးပြီး ဖြန့်ကြဲထားတယ်။ ပထမကတော့ သူ့ကာယကံ သူ့ထံပြန်မှာပါလေဆိုပြီး ဥပေက္ခာပြုနေလိုက်သေးတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ ကံတရားကို လက်ကိုင်ထားတယ်လေ။ လက်ကိုင်ထားလို့လဲ သူ့ကို ဘာမှ မတုန့်ပြန်ခဲ့တာပါ။
ကာကကံကို ကိုယ်နှင့်လုပ်သည်။ ကိုယ်နှင့်လုပ်တာ ကာယကံ။
၀စီကံကို နှုတ်နှင့်ပြောသည်။ နှုတ်နှင့်ပြောတာ ၀စီကံ။
မနောကံကို စိတ်နှင့်ကြံသည်။ စိတ်နှင့်ကြံတာ မနောကံ။
အဲဒီဆောင်ပုဒ်လေးတွေကို ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးဆီမှာ တရားနာရင်း အလွတ်ရခဲ့တာပါ။ တကယ်လဲ အလွန်ကောင်းပြီး အလွန်ထိရောက်တဲ့ လင်္ကာဆောင်ပုဒ်ကလေးတွေပါ။
မကောင်းတဲ့ကာယကံ ၀စီကံ မနောကံတွေကို ကြိုးစားပြီး မကျူးလွန်မိအောင် ထိန်းသိမ်းပြီး နေလာခဲ့တာပါ။
အရာရာတိုင်းကို ကြောက်လို့ ကုတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ တိုင်းပြည်မကောင်းလို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာ၊ အတယ်မထင်နဲ့ လို့ပြောရမလိုလိုဘဲ။
ဒီလောက်စော်ကားမော်ကားလုပ်တာကို ဒီအတိုင်းငြိမ်နေရတာ ကြာလာပြီ။ လက်တုန့်ပြန်ချင်စိတ်တွေ ခဏခဏပေါ်ပေါက်လာတယ်။ လက်တုန့်ပြန်ချင်စိတ်ပေါက်တိုင်းလဲ အနန္တသူရိယအမတ်ကြီး ရဲ့  တုန့်မယူလို ဆိုတဲ့ လင်္ကာလေးက ခေါင်းထဲ အလိုလိုရောက်ရောက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ လက်တုန့်မပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
မိတ်ဆွေတို့လဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။ ကျနော် ဒီလိုရေးတာ လွန်လွန်းသလားလို့။
၁။ကျနော်တို့က အိမ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်။ သူက နေရာတိုင်းမှာ အညစ်အကြေးစွန့်တယ်။
၂။ကျနော်တို့က အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးပြီး နေရာသီးသန့်မှာ သေသေသပ်သပ်စုပုံထားတယ်။ သူက အမှိုက်ထုပ်တွေကို ဖျက်ဆီးထိုးဖောက်ပြီး ဖြန့်ကြဲပစ်တယ်။
၃။ကျနော်တို့က ဘုရားစင်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပြီး ညောင်ရေအိုးတွေကို စနစ်တကျ ပန်းထိုးပြီး ပူဇော်ထားတယ်။ သူက ပန်းတွေကို အပွင့်ရင်းကနေ ညှပ်ဖြတ်ပြီး ဘုရားစင်ပေါ်မှာ ဖွထားတယ်။
၄။ကျနော်တို့ ဘုရားစင်ပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်နှင့်အတူ ပူဇော်ထားတဲ့ အဂ္ဂမဟာသာဝကနှစ်ပါးထဲက
တစ်ပါးရဲ့ ရုပ်တုကို ခေါင်းဖြတ်ပစ်တယ်။ (အဲဒါ ကျနော် သည်းမခံနိုင်ဆုံးဘဲ။ ကျနော်တို့ ဘာသာကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားတာ။ တောက်)
ရေးရင်း ဒေါသထွက်လာလို့ ခဏနားလိုက်ဦးမယ်။ ပြီးမှ ထပ်ရေးပြီး ဒေါသတွေ ထပ်ပေါက်ကွဲပြလိုက်ဦးမယ်။
တစ်ခါထဲသာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အပိုင်းပိုင်း အစိပ်စိပ် ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ချင်တော့တယ်ဗျာ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:03 1 comment:
ကော်ဖီစွဲနေတာကို အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို့ ထင်နေကြသလား။ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အပြစ်မဟုတ်တဲ့အပြင် ကောင်းကျိုးတွေကိုတောင် အများကြီးရသေးတယ်။ ဘာကောင်းကျိုးလဲ ရှူးရှူးပေါက်ရတဲ့ ကောင်းကျိုးလားလို့ ကတ်သီးကတ်သတ်မေးရင်လဲ ကျနော်စိတ်မဆိုးပါဘူး။ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဟုတ်နေတာကိုး။ များများသောက်တော့ များများပေါက်ပေါ့။ အဟဲ။ ညစ်ပတ်သလိုများဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ တတ်နိုင်ဘူး။ ထိန်းလို့မှ မရတော့တာ။ ထွက်သင့်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ထွက်သွားရင် ကျန်းမာရေးကောင်းတာဘဲလေ မဟုတ်ဘူးလား။
ကျနော်ပြောချင်တာက ရှူးရှူးပေါက်တဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၀၆ စက်တင်ဘာလမှာ ထုတ်တဲ့ Reader's Digest စာအုပ်ကလေးကို ဖတ်ရင်း အဲဒီအထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကော်ဖီအကြောင်းလေးပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ကော်ဖီနှင့်အဖော်လုပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ အဲဒီဆောင်းပါးလေးက ကျနော့်အကြိုက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျနော့်လို ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူတွေ ဘာရောဂါကိုမှ မကြောက်ကြဖို့ နှိုးဆော်မောင်းခတ်လိုက်ခြင်းရယ်ပါ။
ကော်ဖီကို သင့်တင့်ရုံသောက်ရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အမှန်တကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ မကြာသေးခင်က သုတေသနလုပ်ထားတဲ့ လေ့လာချက်အရ တွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့။
The Journal of the American Medical Association (အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဂျာနယ်) အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ တစ်ရက်ကို ကော်ဖီ ၃ ခွက်သောက်ခြင်းဟာ အသက်ကြီးရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောတုန်ယင်အားနည်းမှုရောဂါကို ငါးရာခိုင်နှုန်းယုတ်လျော့စေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က တစ်ရက်ကို နှစ်ခွက်က သုံးခွက်ထိသောက်နေကျဆိုတော့ အကြောရောဂါကိုတော့ လုံးဝမကြောက်တော့ဘူးဗျာ။
A Harvard School of Public Health study (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလေ့လာမှုဌာန၊ ဟားဗတ်ကျောင်း) ရဲ့လေ့လာဖော်ထုတ်ချက်အရကတော့ အမျိုးသားတွေ တစ်ရက်ကို ကော်ဖီ ၆ ခွက်ထက် ပိုသောက်ရင် Type2diagetes (ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂)ရောဂါရဲ့ အန္တရာယ်ကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ ယုတ်လျော့စေပြီး အမျိုးသမီးတွေ အတွက်တော့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ယုတ်လျော့စေပါတယ်တဲ့။
ကျနော်က အဲဒီလောက်ထိတော့ ကော်ဖီကို မသောက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ချင်ရင်တော့ ၆ ခွက်လောက် သောက်ရမဲ့ပုံပေါက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ပေါ့လေ။
Japan's Cancer Institute (ဂျပန်ကင်ဆာဌာန)ရဲ့လေ့လာသုတေသနပြုချက်အရကတော့ တစ်ရက်ကို ကော်ဖီ ၃ ခွက် ၄ ခွက်သောက်ရင် အသဲကင်ဆာကို ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဝက်လောက်ထိ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီသုတေသနဌာနက လူတွေကိုယ်တိုင်က ကော်ဖီအရမ်းကြိုက်လို့ ဒီလိုထုတ်ပြန်ထားတာကတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူး။
တကယ်သုတေသနပြုချက်တွေ ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့The British Dietetic Association (ဗြိတိန်ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း)ကတော့ ကော်ဖီအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကို သတိပေးတားမြစ်ထားလေရဲ့ ။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကတော့ ကော်ဖီကို အထက်က ပမာဏတွေထက် ပိုမသောက်သင့်ပါဘူးတဲ့။ ကောက်ဖီကို လွန်ကဲစွာသောက်ရင် ခြေတုန်လက်တုန် ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ အိပ်လို့မရတဲ့ရောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ အထူးသဖြင့်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများ တစ်ရက်ကို ကော်ဖီ နှစ်ခွက်လောက်ဘဲ သောက်သင့်ပါတယ်တဲ့။
တန်ဆေး လွန်ဘေးပေါ့ဗျာ။ အစာလဲဆေး ဆေးလဲအစာဆိုပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အသွားမတော် တစ်လမ်း အစားမတော်တစ်လုပ် အသောက်မတော်တစ်ခွက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မေထုန်မီ အိပ် စား သုံးမျိုးစလုံးဟာ လူမှာရော တိရစ္ဆာန်မှာရော ရှိပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အားသာချက်က အဲဒီသုံးမျိုး အပြင် အသိဥာဏ်ရှိခြင်းတစ်မျိုးပါ အပိုရှိနေခြင်းပါဘဲ။ အဲဒီ အသိဥာဏ်လေးနဲ့ ဆင်ခြင်ပြီး ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်အတွေ့ အကြုံအရ သိရှိထားရင် ပြီးတာပါဘဲ။
ကော်ဖီသောက်နေကျ ပမာဏကို လျော့ချဖို့ မလိုပါဘူး။ ပြီးတော့ ပိုပြီး ကြိုးစားသောက်ဖို့လဲ မတိုက်တွန်းချင်ပါဘူး။ သူ့အိုးနှင့်သူ့ဆန် တန်သလောက်ပေါ့လေ။ လိုအပ်တာကတော့ တစ်ခွက်ပိုသောက်ရင် ဘယ်လိုဖီလင်မျိုးရှိလာတယ်၊ တစ်ခွက်လျော့သောက်ရင် ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကို တိုင်းတာတတ်တဲ့ ဥာဏ်ကလေးကိုထုတ်သုံးပြီး သောက်နေကျ ကော်ဖီကို စိတ်ချလက်ချ သောက်နိုင်ပါကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်များ။
Reader's Digest, September, 2006= Coffee: A Health Drink? ကိုမူတည်ပြီး ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ဖီပန်းကန်ကိုတော့ Wikipedia ထဲက ခဏငှားယူထားပါတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:253comments:
ရယ်သံ တိုးတွေရဲ့ 
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:11 1 comment: